YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, October 28
Myanmar man held after bomb threatTue Oct 28, 2:31 am ET AFP photo shows Myanmar police officers on patrol in Yangon.YANGON (AFP) – A man has been arrested in Myanmar after makingaphone call threatening to blow up government offices, state media said Tuesday, as security remained high afterastring of blasts in Yangon.Tin Myint, 41, was held on Friday, the New Light of Myanmar newspaper reported, three hours after he allegedly threatened to blow up the offices ofapro-junta organisation andalocal police station in downtown Yangon.The paper did not mention his motive for the threats.Tin Myint's arrest came afterasuspected bombmaker accidentally blew himself up on October 19 at his home in Yangon in the latest inaspate of blasts in the military-ruled nation.Myanmar saw four bomb blasts last month, one of which killed two people and wounded 10 atavideo cafe northeast of Yangon. Authorities later arrested an ethnic Karen rebel fighter in connection with the bombing.The ruling junta has in the past blamed explosions on armed exile groups or ethnic rebels who have been battling the military rulers for decades, but the regime has also started pointing the finger at democracy activists.State-run media in September accused two members of detained democracy leader Aung San Suu Kyi's National League for Democracy (NLD) of bombing pro-government offices in July.The NLD wonalandslide victory in 1990 elections, but the junta never allowed it to take office and Aung San Suu Kyi has been under house arrest almost constantly since.
Daniel Cowart,20 (Bells, Tenn. )နှင့် Paul Schlesselman,18 (West Helena, Ark., )တို့Online မှာတွေ့ခဲ့သည်။...သူတို့ကိုJacksonမြို့အပြင်ဖက်(75 miles east of Memphis, Tennessee)မှာဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်လို့ဖက်ဒရယ်ရဲအဖွဲ့ကတနလာင်္နေ့ကထုတ်ဖေါ်ပြောကြားလိုက်သည်။သေနတ်ဆိုင်ကိုစီးနင်းရန်ကြိုးစားမှု၊သေနတ်လက်ဝယ်ရှိရန်စီစဉ်မှုတို့ဖြင့်ဖမ်းဆီးခဲ့သော်လည်း၊စစ်ဆေးချက်များအရ၊စာသင်ကျောင်းမှအမေရိကန်လူမဲ၁၀၀ကျော်ကိုသတ်ရန်ကြံစည်မှု(၈၈ယောက်နှင့်၁၄ယောက်ကိုခေါင်းဖြတ်လုပ်ကြံရန်စီစဉ်သည်ဟုဆိုသည်)၊အပြင်Sen. Barack Obamaကိုလုပ်ကြံရန်ကြံစည်မှုတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ညစာစားပွဲဝတ်စုံအဖြူရောင် ၀တ်ဆင်၍ဦးထုပ်ဆောင်းထားပြီး၎င်းတို့ကားကိုSen. Barack Obamaစီးသောကားဆီဦးတည်မောင်းနှင်၍မှန်တံခါးမှလုပ်ကြံရန်စီစဉ်ထားသည်ဟုဆိုသည်။၈၈နှင့်၁၄သင်္ကေတသည်(white power movement)အမှတ်အသားဖြစ်သည်။(The number 88 is shorthand for “Heil, Hitler” — H is the eighth letter in the alphabet —and 14 signifiesa14-word mantra among white supremacists:)""ကျွန်တော်တို့သေသေချာချာစစ်ဆေးနေပါတယ်...ခိုင်လုံတဲ့သက်သေအထောက်အထားတော့မပြနိုင်သေးပါဖူး""ဟုပြောခဲ့သည်။Sen. Barack Obama သည် မေ၂၀၀၇ Hillary Clinton နှင့်ယှဉ်၍အရွေးခံရန်ရာထားသည့်အချိန်မှစ၍အထူးလျွှို့ဝှက်အေဂျင်စီမှအခြားသောအရွေးခံအမတ်များထက်စော၍စောင့်ရှောက်တာဝန်ယူခြင်းခံရသူဖြစ်သည်။Sen. Barack Obama အားလုပ်ကြံရန်ကြံစဉ်မှုမှာဒါပါနှင့်ဆို၃ခုမြောက်အမှုဖြစ်သည်။John Maccain ကအမေရိကန်တို့၏ကြီးမြတ်မှုကိုတင်စားမဲဆွယ်တတ်ပြီး၊Barack Obama ကစီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖြင့်မဲဆွယ်သည်။ဖေါ်မြူလာအရဆိုလျှင် Barack Obama ပဲအနိုင်ရပေလိမ့်မည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အမေရိကန်တို့သည်စစ်တိုက်၍၀လျှင်စီးပွားရေးဖက်ပြန်လှည့်လေ့ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။Barack Obamaသည်အရည်အချင်းပြည့်ဝသူတယောက်အဖြစ်အမြင်ကျယ်သောအမေရိကန်(အဖြူ)များကကြိုက်နှစ်သက်သော်လည်း၊အဖြူအမဲကပြားဖြစ်သူ Barack Obama ကိုလူမည်းတယောက်အဖြစ်လက်မခံသောအဖြူအချို့လည်းရှိသည်။ထို့ကြောင့် Barack Obama သာသမ္မတဖြစ်ခဲ့လျှင်၎င်းအားစောင့်ရှောက်မှုစရိတ်မှာအခြားသောအမေရိကန်သမ္မတများထက်ပို၍ကုန်ကျမည်မှာအမှန်ပင်။ ။About Barack ObamaUnited States Senator for IllinoisBarack Obama has dedicated his life to public service asacommunity organizer, civil rights attorney, and leader in the Illinois state Senate. He continues his fight for working families in the United States Senate.Sworn into office on January 4, 2005, Senator Obama has focused on tackling the challenges ofaglobalized, 21st-century world with fresh thinking and judgment that no longer settles for the lowest common denominator. Recognizing the terrorist threat posed by weapons of mass destruction, he traveled to Russia with Republican Richard Lugar to beginanew generation of non-proliferation efforts designed to find and secure deadly weapons around the world. Understanding the threat we face to our economy and our security from America's addiction to oil, he's working to bring auto companies, unions, farmers, businesses, and politicians of both parties together to promote the greater use of alternative fuels and higher fuel standards in our cars. He has beenaleading voice in championing ethics reform that would change the culture of corruption in Washington. Whether it's the poverty exposed by Katrina, the genocide in Darfur, the needs of America’s veterans, or the challenges facing working Americans during hard economic times, Senator Obama continues to lead on the issues that will define America in the 21st century.He serves asamember of the Senate Foreign Relations Committee, Veterans Affairs Committee, Health, Education, Labor and Pensions Committee, and Homeland Security and Governmental Affairs Committee.During his eight years in the Illinois state Senate, Senator Obama worked with both Democrats and Republicans to help working families get ahead by creating programs like the state Earned Income Tax Credit, which in three years provided over $100 million in tax cuts to families across the state. He also pushed through an expansion of early childhood education, and afteranumber of inmates on death row were found innocent, Senator Obama enlisted the support of law enforcement officials to draft legislation requiring the videotaping of interrogations and confessions in all capital cases.Senator Obama was born on August 4th, 1961, in Hawaii to Barack Obama, Sr. and Ann Dunham. He graduated from Columbia University in 1983, and moved to Chicago in 1985 to work forachurch-based group seeking to improve living conditions in poor neighborhoods plagued with crime and high unemployment. In 1991, Senator Obama graduated from Harvard Law School where he was the first African American president of the Harvard Law Review.Senator Obama is especially proud of beingahusband and father of two daughters, Malia and Sasha. He and his wife, Michelle, married in 1992 and live on Chicago’s South Side.
Toronto: Art Exhibition - Quiet River by Chaw Ei Thein
(Burmese artist Chaw Ei Thein undertakes her art residency project, Quiet River.)
Time: noon -7pm,3pm (Closing performance)
Place: Toronto Free Gallery, 1277 Bloor Street West, Toronto
Chaw Ei Thein writes,
"Living underadictatorship and inaclosed country I am not used to describing gender or social issues, or politics more than my personal existence in my art work. So in this time I hope that (this) isabig chance to express what we, Burma are facing as problems everyday in life in my project too.”
Chaw Ei Thein isaBurmese currently living in Viet Nam. In addition to holdingalaw degree and teaching art to children and mental health patients, she was the founder and curator of the Sunflower Art Gallery in Yangon. In recent years she has gainedareputation for her work in performance art, working in Burma as well as Thailand, Taiwan, China, Japan, and the U.K.
Ottawa: Celebration of 20th Anniversary of ABSDF
Presented by 20th Anniversary Organizing Committee - Ottawa
Date: Saturday Nov. 1, 2008
Place: Plant Recreation Centre, 930 Somerset West, Ottawa
Ottawa: Damning the Yin Ta Lai at One World Film Festival 2008
(A rare glimpse indigenous population and biodiversity, which are both threatened with extinction by the military regime’s plans to dam the Salween River)
Presented by Inter Pares
Time: 7:45 – 9:00pm
Date: Friday, Oct. 31, 2008
Place: Library and Archives Canada, 395 Wellington St., Ottawa
အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈ သတင်း
ရန်ကုန်ကို နာဂစ်တစ္ဆေခြောက်ကိုသက် အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈လွန်ခဲ့သည့် စနေနှင့် တနင်္ဂနွေနေ့များအတွင်း ရန်ကုန်မြို့တွင် မိုးများဆက်တိုက်ရွာသွန်းခဲ့ပြီး မုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်မည် ဟူသည့်သတင်းများကြောင့် မြို့နေလူထု အထိတ်တလန့်ဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံများက ပြောသည်။ရန်ကုန်မြို့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ အိမ်ရှင်မတဦးက “လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်က မိုးကလည်း အရမ်းကြီးတော့ အတော် လေးလန့်ကြတာပေါ့၊ တခါဖြစ်ဖူးပြီးပြီဆိုတော့ ကြောက်တာမှ ဒီကလူတွေ နေစရာကိုမရှိတာ။ အခုတော့ အေးချမ်းသွား ပြီပေါ့” ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။“မနေ့ကဆို ကျမကလေးကို ကျောင်းတောင်မလွှတ်ဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေက ၃၆ နာရီအတွင်းတို့၊ ၂၄ နာရီအတွင်းတို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခတ်မယ်လို့ သတင်းစာကရေးထားလို့။ မုန်တိုင်းတိုက်မယ်လို့တော့ မရေးဘူးပေါ့” ဟုလည်း အဆိုပါအိမ်ရှင်မက ဆက်ပြောသည်။ယမန်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၏ မိုးလေဝသခန်မှန်းချက်တွင် မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်တို့တွင် တခါတရံ မိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီး လှိုင်းကြီးမည်။ မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ် ရေပြင် မြေပြင်လေသည် တနာရီ မိုင် ၄၀ အထိ တိုက်ခတ်နိုင်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။လွန်ခဲ့သည့် မေလ ၂ ရက်နှင့် ၃ ရက်နေ့များက ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတို့ကို ဖြတ်သန်း တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့် သေဆုံးသူပေါင်း ၁သိန်း ၃ သောင်း ၄ ထောင် ခန့်ရှိမည်ဟု ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂကခန့်မှန်းထားပြီး စစ်အစိုးရကမူ သေဆုံးသူ ၇ သောင်း ၈ ထောင် နှင့် ပျောက်ဆုံးသူ ၅ သောင်း ၆ ထောင်ကျော်ရှိသည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။အဆိုပါ အဖြစ်ဆိုးများကြောင့် ယခုအခါ နာဂစ်ဖြတ်သန်းခဲ့ရာလမ်းကြောင်းတလျှောက် နေထိုင်သူများသည် မိုးသည်းထန် သည့်အချိန်နှင့် ကောင်းကင်၌ မိုးအုံ့သည့်အခါများတွင် မထင်မှတ်သည့်အရပ်မှ အန္တရာယ်တစုံတရာ ထွက်လာတော့ မယောင် စိုးရိမ်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ရန်ကုန်ရှိ လုပ်ငန်းရှင်တဦးက “တနင်္ဂနွေနေ့က လမ်းပေါ်မှာကားတွေတောင်မရှိဘူး၊ ရှင်းနေတာ … နာဂစ်တုန်းက မိုးလေဝသက စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးကြေညာပြီး တကယ်ဝင်လာတော့ အများကြီးသေကုန်တော့ အားလုံးက လန့်နေကြတာပေါ့” ဟု ပြောသည်။“လူတွေက ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပြီး ကြောက်နေကြတာဗျ၊ အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်တောင်သိပ်မထွက်ကြဘူး၊ အဲဒါ တနင်္ဂနွေ နေ့က။ ဧရာဝတီတိုင်းကလူတွေလည်း တော်တော်ကြောက်လန့်နေကြမှာပဲလို့လည်း ရန်ကုန်မှာပြောနေကြတယ်။ ကိုယ်ချင်း စာကြတာပေါ့ဗျာ” ဟု ၎င်းကဆက်ပြောသည်။မိုးများသည်းထန်သည့်အတွက် ရန်ကုန်တွင် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းစနစ် ကောင်းမွန်မှုမရှိသဖြင့် လမ်းမ ကြီးများပေါ် ရေတင်ခြင်းများကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော်လည်း လူအများစိုးရိမ်နေသည့်မုန်တိုင်းသည် ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နိုင်ငံ ကမ်းခြေကို ဖြတ်သန်းတိုက်ခိုက်သွားကြောင်း သိရသည်။စစ်အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြောက်ကိုရီးယားသို့ ရောက်ရှိကိုစိုး အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈မြန်မာစစ်အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းသည် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ပြုံယမ်းမြို့သို့ ယမန်နေ့က ရောက်ရှိနေ ကြောင်း သိရသည်။အဆိုပါ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းကို မြောက်ကိုရီးယား ဒု နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ကင် ရန် အီးလ် က လေဆိပ်တွင် ကြိုဆိုပြီး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပတ် အီ ချွန်းက မြို့တော် ပြုံယမ်းရှိ မြို့တော်ခန်းမတွင် တွေ့ဆုံ နှုတ်ဆက်သည်ဟု မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရ ဗဟိုသတင်းအေဂျင်စီက ဖော်ပြသည်။ အသေးစိတ် သတင်း အချက်အလက်ကိုမူ ဖော်ပြထား ခြင်းမရှိချေ။ယခု ခရီးစဉ်သည် လွန်ခဲ့သော ၂၅ နှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး တဦးအနေနှင့် ပထမ ဆုံးအကြိမ် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။ယင်း ၀န်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ ဘေဂျင်းမြို့တွင် ကျင်းပသည့် အာရှ-ဥရောပ (အာဆမ်)အစည်း အဝေး တက်ရောက်ပြီးနောက် ပြုံယမ်းသို့ ထွက်ခွာလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်ရှိ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတဦးကို ကိုးကား ၍ အေပီသတင်းကလည်း ရေးသားသည်။မြန်မာစစ်အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်း(ဓာတ်ပုံ - အေပီ)မြန်မာနှင့် မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရတို့သည် ၁၉၈၃ ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ အလည်လာရောက်သော တောင် ကိုရီးယား သမ္မတ ချန်ဒူးဝမ် နှင့်အဖွဲ့အား ရန်ကုန်မြို့ အာဇာနည် ဗိမာန်တွင် ကင်မင်ချူး အပါအ၀င် မြောက် ကိုရီးယား နိုင်ငံသား သုံးဦးက ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုနောက်ပိုင်း အနှစ် ၂၀ ကျော် သံတမန် ဆက်ဆံရေး ရပ်ဆိုင်းခဲ့ သည်။ယင်းဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် တောင်ကိုရီးယား သမ္မတ သေဆုံးခြင်း မရှိသော်လည်း ၀န်ကြီးအဖွဲ့ဝင် ၄ ဦး အပါအ၀င် ၂၁ ဦး သေဆုံး၍ ကင်မင်ချူးကိုမူ မြန်မာ အစိုးရက အင်းစိန်ထောင်တွင် ထောင်ဒဏ် တသက် တကျွန်း ချမှတ်ခဲ့သည်။မြန်မာနှင့် မြောက်ကိုရီးယားတို့သည် ထိုကဲ့သို့ ၂ နိုင်ငံ သံတမန် ပုံမှန်ဆက်ဆံရေး ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရာမှ မကြာသေးသော နှစ်များ အတွင်း တိတ်တဆိတ်ဆက်ဆံရေးများပြုလုပ်လာခဲ့ကာ ပြီးခဲ့သည့် နှစ် ဧပြီလ အတွင်းတွင် တရားဝင် ပုံမှန်ဆက်ဆံရေး ပြန်လည်စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။မြန်မာစစ်အစိုးရသည် အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများက ၎င်းတို့ကို စစ်လက်နက်ပစ္စည်း ရောင်းချမှု ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ လက်နက်ဝယ်ယူမှုများ ရှိကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။မြောက်ကိုရီးယားနှင့် မြန်မာစစ်အစိုးရတို့အကြားတွင် လက်နက်ဝယ်ယူရေး ကိစ္စများအပါအ၀င် ၂ ဘက် အပြန် အလှန် ဆက်ဆံရေးတိုးချဲ့နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် စစ်ရေးလေ့လာသူ ဦးဌေးအောင်က လည်း ပြောသည်။“မြောက် ကိုရီးယားနဲ့ မြန်မာအစိုးရကြားမှာ လက်နက်ဝယ်ယူရေး ကိစ္စတွေ အပါအ၀င် ၂ ဘက် အပြန်အလှန် ဆက်ဆံရေး တိုးချဲ့နေ တာလည်းရှိတယ်၊ ရန်ကုန် ဆိပ်ကမ်းကို မြောက်ကိုရီးယား စစ်သင်္ဘောတွေ ဆိုက်ပြီး တော့ အမြောက်ကြီးတွေ အပါအ၀င် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး လက်နက်တွေပေးပို့တဲ့ သာဓကတွေလည်း တွေ့ရတာရှိတယ် ဆိုတော့ အခု နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး သွားတဲ့ ကိစ္စဟာ နောက်ကွယ်မှာ လက်နက်အရောင်း အ၀ယ် ကိစ္စတွေဆက်စပ်ကောင်း ဆက်စပ် မယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်” ဟု ဦးဌေးအောင်က ပြောဆိုသည်။စစ်အစိုးရက တရုတ်၊ အိန္ဒိယနှင့် ရုရှနိုင်ငံများမှ မရရှိနိုင်သော လက်နက်ပစ္စည်းများကို မြောက်ကိုရီးယားမှ ၀ယ်ယူတင်သွင်း ရန် ကြိုးပမ်းနေကြောင်း၊ နျူကလီးယားနည်းပညာကို မြောက်ကိုရီးယားက ဈေးပေါပေါဖြင့် ရောင်းချလိမ့်မည်ဟု ယူဆရ ကြောင်း၊ မြောက်ကိုရီးယားနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် စီးပွားရေး အကြပ်အတည်းနှင့် ကြုံတွေ့နေရသည့် နိုင်ငံများဖြစ်ပြီး နိုင်ငံ တကာ၏ ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုကို ခံနေကြရသောကြောင့် အပြန်အလှန် ထောက်ခံမှု ရှိမည်ဟု ထင်မြင်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။မြောက်ကိုရီးယားသမ္မတ ကင်အီဆွန်း လက်ထက်တွင် ပထမဆုံး မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံ အမတ်ကြီး ဟောင်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူ သခင်ချန်ထွန်းကလည်း မြန်မာနှင့် မြောက်ကိုရီးယား ၂ နိုင်ငံ စလုံးမှာ စီးပွားရေး ကြပ်တည်းနေသော နိုင်ငံများဖြစ်သည့်အတွက် ယခု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်း၏ ခရီးစဉ်သည် စီးပွားရေး အတွက် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း သုံးသပ်သည်။“ကိုယ့်နိုင်ငံကိုလာရောက်ပြီး ဒီလောက်စော်ကားထားတဲ့ နိုင်ငံအစိုးရကို အသိအမှတ်ပြုပြီး သံတမန်ရေး ပြန်ဆက်ဆံတာဟာ တော်ရုံကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ လက်နက်ကိစ္စ၊ နျူကလီးယားကိစ္စအတွက် အကူအညီ ရနိုင်ဖို့ သွားတယ်လို့ ဒီလိုပဲ ယူဆတယ်” ဟု သခင်ချန်ထွန်းကပြောသည်။မကြာသေးခင်က မြောက်ကိုရီးယားသို့ အားကစား ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် သူရအေးမြင့် သွားရောက်ခဲ့ကြောင်း နှင့် ယခုနှစ် အစောပိုင်းက စစ်အစိုးရ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် တချို့သည်လည်း အလည်အပတ် သွားရောက်ခဲ့သေး ကြောင်း သိရသည်။လွန်ခဲ့သော စက်တင်ဘာလလယ်က ၂ နိုင်ငံ သံတမန် ဆက်ဆံရေးအတွက် ရန်ကုန်မြို့တော် ၀န် ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်သိန်းလင်းသည် ပြုံယမ်းသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ယင်းမတိုင်မီ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း က တပ်မတော် စစ်လက်နက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေး အရာရှိချုပ် ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အေးနှင့် လေကြောင်း ရန် ကာကွယ်ရေး အရာရှိ ချုပ် ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်လှိုင်တို့ပါဝင်သော အဖွဲ့တဖွဲ့သည်လည်း မြောက်ကိုရီးယား သို့ သွားရောက်ခဲ့ ကြောင်း၊ လွန်ခဲ့သော ၃ လ အတွင်း မြောက်ကိုရီးယားသို့ အစိုးရအဆင့်ရှိ မြန်မာစစ်တပ်အရာရှိ အဖွဲ့ အနည်းဆုံး ၃ ဖွဲ့ သွားရောက်ခဲ့ကြောင်းတို့ကို အေးရှားတိုင်း သတင်းဌာနက အောက်တိုဘာလဆန်းတွင် ရေးသားထားသည်။“စစ်အဏာရှင် ကြီးစိုးမှုမှောင်ရိပ်” အစီရင်ခံစာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ထုတ်ပြန်အေးလဲ့ အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျား၊မ ကွဲပြားမှုအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ‘စစ်အဏာရှင် ကြီးစိုးမှုမှောင်ရိပ်’ အမည်ရှိ အစီရင် ခံစာတစောင်ကို ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချူပ်(မြန်မာနိုင်ငံ) (WLB) က အောက်တိုဘာ၂၆ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။WLB (Women’s League of Burma)၏ အစီရင်ခံစာတွင် အမျိုးသမီးနှင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ နယ်စပ် ဒေသ လူကုန် ကူးမှု တိုးပွားနေမှု၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးရေး၊ နိုင်ငံ အနှံ့အပြား အမျိုးသမီးများ အပေါ်အကြမ်းဖက်နေမှု စသည့် အဓိကအကြောင်းအရာ ၅ ချက်ကို အခြေခံ ထောက်ပြထားသည်။ယင်း WLB ၏ အစီရင်ခံစာသည် နအဖ အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့ချုပ်မှ စီဒေါကော်မတီ သို့ပေးပို့ သည့် အစီရင်ခံစာအပေါ် ထောက်ပြဝေဖန်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်းသိရသည်။၂၀၀၇ခုနှစ်အတွင်းက ဒုတိယနှင့်တတိယ နှစ်ကြိမ်ပေါင်း စစ်အစိုးရ၏ စီဒေါကော်မတီ သို့ ပေးပို့ထားသော အစီရင်ခံစာများ အရ “မြန်မာအမျိုးသမီးများသည် မမွေးဖွားမီကပင် အမျိုးသမီး အခွင့် အရေးကိုများ ရရှိခံစား နေရသည်” ဆိုသည့် အချက်မှာ လုံးဝမဟုတ်မှန်ကြောင်း WLB ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ရှေ့လာမည့် နိုဝင်ဘာလ ၃ရက်နေ့တွင် နအဖ အမျိုးသမီးများကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့က ၎င်းတို့တင်ပြထားသည့် အစီရင်ခံစာ မှန်ကန်ကြောင်း၊ စီဒေါကော်မတီနှင့် သုံးသပ်မည့် စည်းဝေးပွဲ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရ သည်။မြန်မာစစ်အစိုးရသည် စီဒေါစာချုပ်(CEDAW - အမျိုးသမီးများအား နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ပပျောက်ရေး သဘောတူ စာချုပ်)ကို ၁၉၉၇ခုနှစ်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ ပထမဆုံး အစီရင် ခံစာကို ၁၉၉၉ခုနှစ်တွင် စီဒေါကော်မတီသို့ ပေးပို့ခဲ့သည်။ ၎င်းအစီရင်ခံစာကို ၂၂ကြိမ်မြောက် စီဒေါကော်မတီ က သုံးသပ်ခဲ့ကြောင်းလည်း WLB ၏ အစီရင်ခံစာ အနှစ်ချူပ်ပိုင်း တွင်ဖော်ပြထားသည်။WLB အစီရင်ခံစာပြုစုသူများထဲမှ တာဝန်ရှိသူ တဦးဖြစ်သည့် ချယ်ရီဇာဟောင်က “နအဖ အစိုးရက တင်ပြ ထားတဲ့ မြန်မာ ပြည်မှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မခံရပါဘူး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနဲ့ လုပ်ငန်း ကိုင်ငန်းတွေ အားလုံးအဆင် ပြေပါတယ်လို့ ပြောဆိုထားခြင်းအပေါ် မဟုတ်မှန်ကြောင်း ကျမတို့ကလည်း အစီရင်ခံစာမှာသက်သေအချက်အလက်နဲ့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ စီဒေါကော်မတီကလည်း ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအချက်အလက်တွေကို နအဖ ကိုဖိအားပေးပြောဆိုရာမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါ တယ်” ဟုပြောသည်။နအဖ အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့ချုပ်၏ အစီရင်ခံစာ၌ မြန်မာအမျိုးသမီးများ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက် ခံရမှု များ မရှိဟု ဖော်ပြထားသော်လည်း ၂၀၀၅ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၀၈ခုနှစ် အတွင်း တရုတ်- မြန်မာ နယ်စပ်ရှိ မူဆယ် မြို့နှင့် ရွှေလီမြို့များတွင် မြန်မာအမျိုးသမီးများ အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခံရမှု ပိုမိုများပြားလာသည်ကို တွေ့ ရကြောင်း တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေးလေ့လာသူ ဦးအောင်ကျော်ဇောက ပြောသည်။လူမှောင်ခို ပွဲစားများသည် မိသားစုလိုက် မြန်မာလူမျိုးများပင်ဖြစ်ပြီး အရောင်းစားခံမိန်းကလေးများကို သတ်ဖြတ်သည် အထိဖြစ်လာကြောင်းနှင့် ၎င်းအရောင်းစားခံ မြန်မာမိန်းကလေးများသည် တရုတ်ပြည် အန်းဝေးပြည်နယ်ပိုင်းရှိ တရုတ် လူမျိုးများလက်တွင် နှိပ်စက်မှုအမျိုးမျိုးနှင့် ဆိုးရွားလှသည့် ရာသီဥတုဒဏ်ကို ခံရကြောင်း၊ အသက်ဆုံးရှုံးရမှုများလည်း ရှိကြောင်းတို့ကို ဦးအောင်ကျော်ဇော က ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။တရုတ်ပြည်အိုလံပစ်ပွဲမတိုင်မီ တရုတ်အာဏာပိုင် ဒေသအလိုက်နှင့် လူဝင်မှုကြည့်ကြပ်ရေးတို့ပူးပေါင်းပြီး မှတ်ပုံတင်မရှိဘဲ နေထိုင်သည့် မြန်မာအမျိုးသမီး ၂၀၀ နီးပါး ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံရကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောသည်။ထိုသို့ဖမ်းဆီးခံနေရသူများထဲမှ ၂၄ဦးကိုမူ ရွှေလီရှိ လူမှောင်ခိုကူးမှုတားဆီးရေးအဖွဲ့သို့ တရုတ်အာဏာပိုင်များက ပို့ဆောင် ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရသည်။“လူမှောင်ခို ရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ မှောင်ခိုဂိုဏ်းတွေ ပပျောက်အောင်တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ဆောင်မှုမှာ ဗမာအစိုးရ က ထင်သလောက်မလုပ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ အရောင်းအစားခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ အပြန် ခရီးစရိတ်ကအစ ဖြေရှင်းပေးဖို့ အစိုးရ အောက်ခြေဌာနမရှိဘူး”ဟု ဦးအောင်ကျော်ဇောက ပြောဆိုသည်။အိုဘားမားလား မက်ကိန်းလားအေးချမ်းမြေ့ အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ သမ္မတလောင်းများ ဖြစ်ကြသော ဘားရက် အိုဘားမားနှင့် ဂျွန်မက်ကိန်းတို့ ၂ ဦးအပေါ်၌ ပြည်တွင်း ပြည်ပရှိ မြန်မာများ၏ မျှော်လင့်ပုံခြင်း မတူညီကြသော်လည်း ၎င်းတို့ ၂ ဦး၏ မြန်မာပြည်အပေါ် ထားသည့် သဘောထား မှာမူ များစွာ မကွာခြားလှပေ။အိုဘားမားနှင့် ဂျွန်မက်ကိန်း (ဓာတ်ပုံ - ရိုက်တာ)ယခုအခါ အမေရိကန် သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် ရက်ပိုင်း ခန့်သာ လိုတော့သည်။ မြန်မာ အများစု ကတော့ ဂျွန်မက်ကိန်းသာ အနိုင်ရခဲ့ပါမူ မြန်မာပြည်၏ ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် အားတက်ဖွယ်ဖြစ်သည်ဟု မျှော်လင့်နေ ကြသည်။ သို့ရာတွင် အိုဘားမားကို ထောက်ခံသူ မြန်မာများကမူ ၎င်းကသာ လူ့အခွင့်အရေး ကိစ္စရပ်များကို ပိုမို ဂရုစိုက်သည့် အတွက် သူအနိုင်ရရှိပါမှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေး ကိစ္စရပ် များ ဖြေရှင်းနိုင်ရန် အခွင့်အလမ်း သာလိမ့်မည်ဟု ဆိုကြသည်။ဆန္ဒမဲ ပေးခွင့်ရမည့် အမေရိကန် အခြေစိုက် မြန်မာများက အမေရိကန် အလုပ်သမားသမဂ္ဂ တခုလုံးမှာ အိုဘားမားအတွက် ထင်ရှားစွာ မဲဆွယ်ပေးနေသည်ဟု ဆိုသည်။ ၎င်းတို့မှာ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေကြသူများလည်း ဖြစ်သည်။လက်ရှိ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်လျှက်ရှိသည့် ၁၉၈၈ ခုနှစ် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်း ကိုမိုးသီးဇွန် ကမူ မြန်မာ့အရေးကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားသည်ဟု ယူဆသော ဂျွန်မက်ကိန်းကိုသာ ထောက်ခံသည်ဟု ဆိုသည်။“မက်ကိန်းက မြန်မာပြည်အရေးကိုတော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားတယ်။ ပြီးတော့ သူက မြန်မာပြည်ကိုလည်း ရောက်ဖူးတယ်။ မြန်မာစစ်အစိုးရကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တဲ့ ကိစ္စတွေမှာလည်း သူက အားတက်သရော ဦးဆောင် ခဲ့တာ” ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။ဆက်လက်၍ ကိုမိုးသီးဇွန်က အိုဘားမားသည် ဂျွန်မက်ကိန်းထက် မြန်မာပြည်နှင့် ပတ်သက်၍ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မရှိခဲ့ဟု ဝေဖန်သည်။၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်က ဂျွန်မက်ကိန်းသည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အရီဇိုးနားပြည်နယ် လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် မြန်မာပြည်သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ရင်း မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကျနော်တွေ့ဆုံဖူးသမျှထဲမှာ အကြီးမြတ်ဆုံး လူသားပဲ” ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။လက်ရှိ အမေရိကန်သမ္မတ ဂျော့ရ်ှဒဗလျူဘုရှ်၏ ဇနီးဖြစ်သူ လော်ရာဘုရ်ှကဲ့သို့ပင် ဂျွန်မက်ကိန်း၏ ဇနီးသည် စင်ဒီ မက်ကိန်းသည်လည်း မြန်မာစစ်အစိုးရကို ဝေဖန်ရှုတ်ချသူ တဦးဖြစ်သည်။ ဇွန်လက ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက် လည်ပတ်ရင်း မြန်မာအစိုးရသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် တန်းဖိုးမရှိဟု စင်ဒီမက်ကိန်းက ဝေဖန်ခဲ့သေးသည်။“တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ လူတွေပဲ။ တိုင်းသူပြည်သားတွေ ဒုက္ခရောက်နေတာ၊ ဝေဒနာ ခံစားနေရ တာကို သူတို့က ဘာမှမဖြစ်သလိုပဲ နေနိုင်တဲ့ အုပ်ချုပ်သူတွေ” ဟု သူက စစ်အစိုးရကို ပြစ်တင်ခဲ့သည်။သို့ရာတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံသား မြန်မာတဦးဖြစ်သူ ကိုရွှေ၏ အမြင်ကမူ ကိုမိုးသီးဇွန်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နေသည်။ သူက လာမည့် နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် ဆန္ဒခံယူပွဲတွင် အိုဘားမားကို သမ္မတအဖြစ် မဲပေးမည်ဟု ဆို၏။“သမ္မတ ကလင်တန်လက်ထက်က ကျနော် အမေရိကားကို စရောက်တာ။ အဲဒီတုန်းက အလုပ် အလွယ်တကူ ရခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သမ္မတဘုရ်ှလည်း တက်လာရော နိုင်းအလဲဗင်း (9/ 11) ပြဿနာဖြစ်ရော။ အဲဒီ နောက်ပိုင်းမှာ ကျနော်တို့ တော်တော်လေး ရုန်းကန်ကြရတယ်။ ရီပတ်ဘလစ်ကန် သမ္မတ သက်တမ်း ၂ ဆက်အတွင်း စီးပွားရေး လုံးဝ ကျဆင်း တာကို ပြတာပဲ။ ဒီအကျိုးဆက်ကို အမေရိကန်မှာ နေတဲ့သူတွေ အားလုံး ခံနေရတာ” ဟု ကိုရွှေက ပြောပြသည်။ဆက်လက်၍ သူက သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဂျွန်မက်ကိန်း အနိုင်ရသည့်တိုင်အောင် မြန်မာပြည်၏ အာဏာရှင် စစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်မှု အဆုံးသတ်မည် မသတ်မည်ကို ပြောရန် အလွန်ခက်ခဲသည်ဟု ဆိုသည်။မိုးမခ အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို တည်ထောင်သူ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် နေထိုင်သည့် မောင်ရစ် ကလည်း အိုဘားမားကိုသာ နှစ်သက် သဘောကျ သည်ဟု ဆိုသည်။ သူက အိုဘားမား၏ ငယ်ရွယ်နုပျိုမှုကြောင့် ပိုမိုလက်ခံလိုချင်း ဖြစ်သည်။“သူ့အသက်က ၄၆ နှစ်ဆိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အသက်အရွယ်လောက်ပဲ” ဟု မောင်ရစ်က ပြောသည်။မြန်မာပြည်တွင်းရှိ အပတ်စဉ် ဂျာနယ်များတွင်လည်း အမေရိကန် သမ္မတလောင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ရေးသား ဖော်ပြမှုများ ရှိသည်။ အပတ်စဉ်ထုတ် ဂျာနယ်တစောင်ဖြစ်သော မြန်မာတိုင်းမ်စ် ဂျာနယ်က လော့စ်အိန်ဂျလိစ် တိုင်းမ် သတင်းစာတွင် ပါရှိသော သမ္မတလောင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲများကို ပြန်လည် ဖော်ပြပေးခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဖော်ပြရာတွင် အိုဘားမားက ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရရှိပြီး ဂျွန်မက်ကိန်းက ၄၁ ရာခိုင်နှုန်း ရရှိသည့်အတွက် အိုဘားမားက ၉ ရာခိုင်နှုန်း ကျော် အနိုင်ရရှိနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ဝိကလီး အလဲဗင်း ဂျာနယ်ကလည်း ကြိုတင်မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ခြင်းမှာ နောက်ဆုံးစကားစစ်ထိုးပွဲ ပြီးမှ ဆန္ဒခံယူ ထားခြင်းဖြစ် သောကြောင့် အိုဘားမားမှာ သမ္မတရာထူးရရန် သေချာသလောက်ရှိသည်ဟု ဖော်ပြသည်။သည်ဗွိုက်စ် အပတ်စဉ်ဂျာနယ်ကမူ ယခုတပတ် နိုင်ငံတကာ သတင်းကဏ္ဍတွင် အိုဘားမား အနေနှင့် မက်ကိန်းကို အလဲ ထိုးနိုင်လိမ့်မည်ဟု ရုရှားအစိုးရက မျှော်လင့်ထားကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။“မြန်မာပြည်က အပတ်စဉ် ဂျာနယ်တိုင်း လိုလိုမှာ အမေရိကန်သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲ သတင်းတွေ ဖော်ပြ နေကြတယ်။ အများစုကတော့ အိုဘားမားကို ပိုလက်ခံတယ်။ ကျနော်ကတော့ မက်ကိန်းကို ပိုကြိုက်တယ်ဗျ။ သူက ပိုပြီး လက်တွေ့ကျ တယ်” ဟု ရန်ကုန်အခြေစိုက် စီးပွားရေး သမားတဦးက သုံးသပ်သည်။ဆက်လက်၍ ၎င်းက “တချို့ကတော့ မက်ကိန်းက အသက် ၇၀ ကျော်နေပြီ လို့ ပြောကြတယ်။ စစ်အေး တိုက်ပွဲကို အဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့ သမ္မတ ရေဂင်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ အဲဒီအချိန်မှာ သူ့အသက်က ၇၀ ကျော်နေပြီလေ” ဟု ဆိုသည်။ရန်ကုန်တွင် နေထိုင်နေသည့် လူငယ်အများစုကမူ ဂျွန်မက်ကိန်းထက် အိုဘားမားကို ပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ ရန်ကုန် အခြေစိုက် ယူအန် အေဂျင်စီတွင် လုပ်ကိုင်နေသော ကိုအောင်မင်းက “အိုဘားမားက ငယ်တယ်၊ ပြီးတော့ သူသာ အမေရိကန်သမ္မတဖြစ်ရင် ပထမဦးဆုံး လူမည်း အမေရိကန် သမ္မတဖြစ်မှာလေ” ဟု ဆိုသည်။ရန်ကုန်အခြေစိုက် ခရီးသွားလုပ်ငန်း တခုတွင် လုပ်ကိုင်နေသည့် မဆွေကလည်း အိုဘားမားမှာ ငယ်ရွယ်နုပျို၍ ပိုမို တက်ကြွစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်မည်ဟု ယူဆရသောကြောင့် ပိုမိုလက်ခံသည်ဟု ပြောသည်။လေ့လာသူတို့ကမူ ဂျွန်မက္ကိန်းမှာ မြန့်မာ့အရေးကို ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုပြီး အိုဘားမားက တခွန်းတပါဒမှ မဟသော်လည်း မြန်မာ့အရေးအတွက် ရီပတ်ဘလစ်ကန်နှင့် ဒီမိုကရက်တစ် နှစ်ခုစလုံး မျှတစွာ ဆောင်ရွက် သင့်သည်ဟု သုံးသပ်သည်။ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့၏ အတွင်းရေးမှူး ဦးဘိုကြည်ကမူ ဂျွန်မက်ကိန်းနှင့် အိုဘားမား ၂ ဦးစလုံးပင် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ထားရှိသည့် သဘောထား အတူတူပင်ဖြစ် သောကြောင့် မည်သူအနိုင်ရသည်ဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် အရေးမကြီးလှဟု ဆိုသည်။ရန်ကုန်တွင် နေထိုင်သည့် ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားတဦးဖြစ်သူ ဦးချန်ထွန်းက “အိုဘားမား အနိုင်ရရင် ကမ္ဘာကြီး အတွက် ကောင်းတယ်။ ဂျွန်မက်ကိန်းနိုင်ရင်တော့ မြန်မာပြည်အတွက် ကောင်းတယ်” ဟု သုံးသပ်သည်။ဗုံးကြောင့် သေဆုံးသူမှာ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကြောင်း စွမ်းအားမြှင့် ၀န်ခံမုံပီးအင်္ဂါနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 28 2008 17:31 - မြန်မာစံတော်ချိန်နယူးဒေလီ။ ။ စွမ်းအားမြှင့် မြန်မာကျောင်းသား စစ်သည်တော်များအဖွဲ့ (VBSW) ဟုခေါ်သော လျှို့ဝှက် သိပ်သည်းလှသည့် အဖွဲ့က အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ဆင်ခြေဖုံးဒေသ ရွှေပြည်သာတွင် သေဆုံးသွားခဲ့သူမှာ သူတို့ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံ ကြေညာလိုက်သည်။ပြည်ပရှိ မြန်မာအတိုက်အခံ အသိုင်းအ၀ိုင်းအကြား ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည့် အီးမေးလ်တွင် ကိုသက်ဦးဝင်းမှာ သူတို့၏ မြေအောက် အဖွဲ့ဝင်တဦး ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရွှေပြည်သာရှိ နေအိမ်တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲ သေဆုံးသွားသည့်သူ့အား ဦးညွှတ် ဂုဏ်ပြုပါကြောင်းဖြင့် (VBSW) က ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။သက်ဦးလွင် ခေါ် သန်းလွင်၊ ကိုယ်ပိုင်အမှတ် ၉၉၉၉၅၄ သည် မသေဆုံးမီက ရန်ကုန်မြို့တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသူ ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် အဆိုပါအဖွဲ့က ပြောဆိုသည်။ သူသည် အဖွဲ့ဝင်များစွာထဲမှ တဦးသာဖြစ်ပြီး စစ်အာဏာရှင်များ၏ အကြမ်းဖက် အုပ်စိုးမှုကို အကြမ်းဖက်နည်းဖြင့် တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်သွားရန် ကတိပြုကြောင်းလည်း ဆိုထားသည်။`ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံပြီး တိုက်ပွဲအသီးသီးမှာ ကျဆုံးခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းများ ဖြစ်ခဲ့သည့် သူရဲကောင်းများကို ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်သလို စစ်အာဏာရှင်များက ပြည်သူအား ဖိနှိပ်နေသမျှ၊ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားနေသူများအား ဖမ်းဆီး နှိပ်စက်နေသမျှ၊ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များထံ အာဏာလွှဲပြောင်း မပေးသမျှ ကာလပတ်လုံး မိမိတို့ တိုက်ပွဲဝင်မှုများ မည်သို့မှ ရပ်တန့်သွားမည် မဟုတ်ကြောင်း စစ်အာဏာရှင်များအား သတိပေးလိုက်သည်´ ဟု (VBSW) ၏ ကြေညာချက်တွင် ရေးသားဖော်ပြသည်။ကိုသက်ဦးဝင်းသည် သံဃာဟောင်းတဦးဖြစ်ကာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် တော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင် ဆင်နွှဲခဲ့ကြောင်း၊ အထက်တန်းကျောင်းသား ဘ၀ကတည်းက အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှု အများအပြားတွင် ပါဝင် ဆင်နွှဲခဲ့ကြောင်းလည်း ပြောဆိုထားသည်။အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန် ဆင်ခြေဖုံးရှိ ရွှေပြည်သာတွင် လူတဦးသည် ဗုံးတပ်ဆင်နေစဉ် ထိုဗုံးဖြင့်ပင် သေဆုံးသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့က ဆိုသည်။အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင်မူ သက်ဦးဝင်းမှာ အရက်သမားတဦးဖြစ်ကာ အလုပ်အကိုင်မရှိ အခြေအနေမဲ့ ဖြစ်ကြောင်း၊ ရဟန်းဘောင်သို့ မကြာခဏ ၀င်ခဲ့ဖူးပြီး ယခုအခါ အရပ်သားအဖြစ် နေထိုင်နေကြောင်း ရေးသားထားသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ဆန္ဒပြပွဲများအပြီးတွင် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်သို့ ထွက်ခွါသွားခဲ့ကြောင်း ပြောသည်။VBSW အဖွဲ့ကို ထင်မြင်ချက်ပေးရန်နှင့် အတည်ပြုရန် ဆက်သွယ်ရာ မရရှိဘဲ ယခင်ကလည်း ရန်ကုန်တွင် ဖြစ်ပွါးခဲ့သည့် အလားတူ ပေါက်ကွဲမှုများကို သူတို့ လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာဖူးသည်။ထိုပေါက်ကွဲမှုများမှာ ဧပြီလက ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ စားသောက်ဆိုင်တခုအနီး ပေါက်ကွဲခဲ့သော ဗုံးပေါက်ကွဲမှုနှင့် ဇူလိုင်လအတွင်း ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးရုံးအတွင်း ပေါက်ကွဲခဲ့သော ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတို့ ပါဝင်သည်။ထိုအတောအတွင်း ပန်းဘဲတန်း ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးရုံးကို သောကြာနေ့က ဖုံးခေါ်ပြီး ခြိမ်းခြောက် ပြောဆိုခဲ့သူ တင်မြင့် ဆိုသူကိုလည်း ရဲက ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းဖြင့် အင်္ဂါနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ရေးသားဖေါ်ပြသည်။အဆိုပါ ကိုတင်မြင့်က ပန်းဘဲတန်းကြံ့ဖွံ့ရုံးနှင့် ရဲစခန်းတို့ကို ဖေါက်ခွဲပစ်မည်ဟု ခြိ်မ်းခြောက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ယခုအခါ စစ်အစိုးရ အုပ်စိုးနေသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများမှာ အရင်ထက်ပို၍ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး၊ စက်တင်ဘာလအတွင်း ဗုံး ၄ ကြိမ် ပေါက်ကွဲခဲ့သည်။သီတဂူဆရာတော်အား ဂုဏ်ထူးဆောင် ဒေါက်တာဘွဲ့ ချီးမြှင့်သဲသဲအင်္ဂါနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 28 2008 10:21 - မြန်မာစံတော်ချိန်နယူးဒေလီ။ ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာအကျိုး ဆောင်ရွက်သည့် ထင်ရှားသော ရှင်သူမြတ်များအား ပေးအပ်သည့် ဂုဏ်ထူးဆောင် ဒေါက်တာဘွဲ့တခုကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ နာလန်ဒါ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်က သီတဂူဆရာတော် ဦးဉာဏိသရအား ယနေ့ ပေးအပ်ချီးမြှင့်လိုက်သည်။နာလန်ဒါ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဒေါက်တာပက်တို့က သက်တော် ၇၂ နှစ်၊ ၀ါတော် ၅၂ နှစ်ရှိ ဆရာတော် ဦးဉာဏိသရသို့ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဒေါက်တာဘွဲ့ ချီးမြှင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။''ဒီဘွဲ့ဟာ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို ချီးမြှင့်တာလဲဆိုရင် ကိုယ့်တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် သာသနာအကျိုး၊ ဘာသာအကျိ်ုး ဆောင်ရွက်တဲ့၊ နိုင်ငံတကာမှာလည်း သိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကို ချီးမြှင့်တာပါ။ ဒီဘွဲ့ကို ပထမဆုံး ပေးတာပါ။ သီတဂူဆရာတော်ရယ်၊ ဗီယက်နမ်က ဆရာတော်တပါးရယ်နဲ့ ၂ ပါးကို ချီးမြှင့်တာပါ။ ဆရာတော်က ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ဆရာတော်အဖြစ် ရပြီး၊ ဗီယက်နမ် ဆရာတော်ကတော့ မဟာယနဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ် ရတာပါ'' ဟု နာလန်ဒါတက္ကသိုလ်မှ စာသင်သား သံဃာတော်တပါးဖြစ်သူ ဦးဉာနောဘာသ က မဇ္ဈိမကို မိန့်ကြားသည်။''သီတဂူဆရာတော် ဘုရားကြီးက နိုင်ငံတကာမှာ ဟောတယ်၊ ပြောတယ်။ အိန္ဒိယမှာ ရောက်နေတဲ့ စာသင်သား ရဟန်းတော်တွေကိုလည်း နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ ၁၀၀ စီ လှူတယ်။ ပြည်တွင်းမှာလည်း သာသနာပြုပြီး လူတွေအကျိုးကို ဆောင်ရွက်နေတာဆိုတော့ ဆရာတော်ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင့် ဒီဘွဲ့ကို ပေးတာပါ'' ဟု သူက ထပ်ပြောသည်။အခမ်းအနားတွင် သီတဂူဆရာတော်ကြီးက ထေရ၀ါဒနှင့်ပတ်သက်ပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဟောကြားခဲ့သေးသည်။သီတဂူဆရာတော်ကြီးအား အနီးကပ် ကူညီပေးနေသည့် အရှင် ဦးနန္ဒ၀ံသ ''ဒီဘွဲ့တံဆိပ် ဆပ်ကပ်ခံရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာတော်ဘုရားကြီး သဘောထားကတော့ နာလန်ဒါဆိုတာက တချိန်က ပညာအရာမှာ ဧဒင်္ဂ ရခဲ့တဲ့ ရှင်ဿာရိပုတ္တရာ ကိုယ်တော်မြတ် မွေးဖွားရာ နေရာဖြစ်တဲ့ ဒီလိုနေရာမှာ ဘွဲ့ယူရတဲ့အတွက် အလွန်ဝမ်းမြောက်ကြောင်း ပြောသွားပါတယ်'' ဟု မိန့်ကြားသည်။ဆရာတော်သည် မြန်မာနိင်ငံက ချီးမြှင့်သည့် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဏိတ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ကို ရရှိပြီးဖြစ်သလို ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ Chulalongkorn တက္ကသိုလ်မှ ဒေါက်တာဘွဲ့ Ph.D, D.Lit တခုလည်း ရရှိခဲ့သေးသည်။သီတဂူ ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးရုံ၊ နိုင်ငံတကာ သီတဂူ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် ရေလှူဒါန်းရေး စီမံကိန်းကို ထူထောင်ခဲ့သူအဖြစ် ဆရာတော်သည် ကျော်ကြားသည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ကျော်သို့ လှည့်လည်ကာ ဗုဒ္ဓသာသနာ ပြန့်ပွားရေး ဟောကြားမှုများလည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ယခုနှစ် မေလဆန်းတွင် တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ဘေးဒုက္ခကျရောက်ရာ ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း လိုက်လံကာ အကူအညီများ ပေးခဲ့သလို စာသင်ကျောင်း ၅၀ ကျော် ပြန်လည်တည်ဆောက်နိင်ရေး အလှူခံ ကြီးကြပ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ဆရာတော်ကြီးအား ပဲခူးတိုင်း သဲကုန်းမြို့တွင် ၁၉၃၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သဖြင့် ဇာတိကို အစွဲပြုကာ သဲကုန်းဆရာတော်အဖြစ်လည်း လူသိများသည်။အာဏာရှင်မှောင်ရိပ်၌ မြန်မာအမျိုးသမီးများ ကျားမခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆိုးရွားစွာခံနေရပီတာအောင်/ ၂၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၈အာဏာရှင်စနစ်ကြီးစိုးသည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ကျားမခွဲခြားဆက်ဆံမှုကို အစီစဉ်တကျ ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်ခံနေရသည်ဟု အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) WLB က အစီရင်ခံစာ ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန်ကာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားသည်။‘အာဏာရှင်ကြီးစိုးမှုမှောင်ရိပ်’ ဟု အမည်ပေးထားသည့် ယင်းအစီရင်ခံစာ၌ အမျိုးသမီးနှင့် မိန်းခလေးငယ်များ လူကုန်ကူးခံနေရမှု၊ ပညာရေးတွင် သမီးမိန်းခလေး၏ ပညာရေးကို သားယောက်ကျားလေး၏ ပညာရေး လောက်ဦးစားပေးမခံရမှု ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုးဝါးသဖြင့် အမျိုးသမီး(၁၂)ဦးတွင် (၁) ဦး ကိုယ်ဝန် ဆောင်နေစဉ် သေဆုံးနေရမှုနှင့် ကျေးလက်နှင့်တိုင်းရင်းသားဒေသများ၌ နအဖ စစ်တပ်၏ အမျိုးသမီးများအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု များကို ဒေသခံအမျိုးသမီးများနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်များနှင့် တကွ တင်ပြ ထားသည်။ထို့ပြင် အာဏာရှင်စနစ်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကျင့်သုံးနေမှုကြောင့် မြန်မာ့လူမှုအသိုင်းအ၀န်း၌ အမျိုးသား များလွှမ်းမိုးနေပြီး စစ်တပ်သည် မြို့တိုင်း၊ ရွာတိုင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်တိုင်း၊ အသင်းအဖွဲ့တိုင်းကိုပါ ထိန်းချုပ်ထားကြောင်း လတ်တလော ရေးဆွဲအတည်ပြုထားသည့် အခြေခံဥပဒေသည်လည်း ကျား၊မတန်း တူရေးကိုအာမခံချက် မပေးရုံသာမက အမျိုးသားများကြီးစိုးသည့် စစ်တပ်ကို လွှတ်တော်အရပ်ရပ်တွင် လေးပုံတပုံချုပ်ကိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည်ဟုလည်း ဝေဖန်ထောက်ပြထားသည်။မြန်မာနိုင်ငံ၌ရှိနေသည့် ရှေးရိုးစွဲ ပုံစံခွက်ဓလေ့ထုံးတမ်းများကြောင့် မြန်မာအမျိုးသမီးများမှာ နဂိုကတည်းက နှိပ်ချခွဲခြားဆက်ဆံခံနေကြရရာမှ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့် ပို၍ ခွဲခြားနှိပ်ချဆက်ဆံခံနေရသည်ဟု WLB အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး မနန်းယဉ်ကပြောသည်။၎င်းက “ အမျိုးသမီးတွေ ကိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုကရှေးရိုးစွဲကမ္ဘာကြီးမှာရှိခဲ့တယ်။ အဲဒါတွေကိုပယ်ဖျက်ဖို့ နိုင်ငံ တကာသဘောတူစာချုပ်တွေမှာ ပြောထားတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့စစ်အာဏာရှင်ရဲ့အောက်မှာ ဒီဟာ ပယ် ဖျက်ဖို့ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဆက်ပြီးတော့ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ကြီးစိုးနေသရွေ့တော့ ကျား၊ မတန်းတူရေး ဆိုတာ ကိုဘယ်လိုမှမျှော်လင့်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ စစ်တပ်အာဏာပိုင်တွေကနေချိုးဖောက်တဲ့ အမျုိးသမီးတွေပေါ်အကြမ်း ဖက်မှုတွေကို အရေးယူလို့မရဘူးပါဘူး။ မရတဲ့အခါ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေပိုပြီးတော့ ဖြစ်လာပါတယ် ”ဟု ပြောသည်။အမျိုးသမီးများအား နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ပပျောက်ရေးနိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ် (CEDAW) ကို မြန်မာနိုင်ငံက လက်မှတ်ရေးထိုးထား၍ စာချုပ်ပါကတိများအတိုင်း မြန်မာစစ်အစိုးရက ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိ ကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြချက်များကို လာမည့် နိုဝင်ဘာ (၃)ရက် ဂျနီဗာ၌ ကျင်းပမည့် (၄၂)ကြိမ်မြောက် စီဒေါ ကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြသွားမည်ဟု WLB ကဆက်လက်ပြောကြားသည်။အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ)ကို ကရင်၊ကရင်နီ၊ရှမ်း၊ကချင်၊ရခိုင်၊ဗမာ၊ထားဝယ်၊ပအိုဝ့်၊ပလောင်၊ လားဟူ၊ ကူကီး စသည့် တိုင်းရင်းသား အမျိုး သမီးအဖွဲ့ (၁၂)ဖွဲ့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီး ထိုင်းနိုင်ငံတွင်အခြေစိုက်သည်။နိုင်ငံရေးသမားကြီးအချို့  ဟောင်ကောင်သွားမည်NEJ/ ၂၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၈ရန်ကုန်မြို့ရှိ နိုင်ငံရေးသမားကြီး(၃)ဦးတို့ သည် ဟောင်ကောင်ရှိ တက္ကသိုလ်တခုတွင် မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေး တင်ပြရန် လာမည့် ဒီဇင်ဘာလ၌ ဟောင်ကောင်သို့ သွားရောက်ရန်စီစဉ်နေကြောင်း ကာယကံရှင်များက ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောပြသည်။ထိုသို့သွားရောက်ရန် ဟောင်ကောင်မြို့တော်တက္ကသိုလ် အာရှနှင့်နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးဌာန လက်ထောက် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ကျော်ရင်လှိုင်က စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဖိတ်ကြားခံရသူများအနက် သခင်လှကွန်း၊ သခင် တင်မြနှင့် ရှမ်းနိုင်ငံရေးသမားကြီး ဦးရွှေအုံးတို့ပါဝင်ကြောင်းနှင့် ရဲဘော်ချစ်လှိုင်မှာ မျက်စိမကောင်းသဖြင့် သွားနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း သခင်လှကွန်းက ခေတ်ပြိုင်သို့ပြောသည်။၎င်းက “ ဒီဇင်ဘာကျမှပါ။ ရက်လည်းမသိသေးဘူး။ ပထမအပတ်အကုန်လောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ အခုကြိုး စားတုန်းပဲ။ ပတ်စ်ပို့တွေဘာတွေရအောင်၊ ဆွေးနွေးပွဲ ခေါင်းစဉ်တောင်မသိရသေးဘူး။ ကျော်ရင်လှိုင်လာတုန်းက ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောမသွားဘူး။ ဗမာပြည်အကြောင်းဆွေးနွေးကြမှာနဲ့တူပါတယ်။ ဗမာပြည်မှထွက်တဲ့ တချို့ဂျာနယ် တွေထဲမှာ ကျနော်တို့နဲ့ အင်တာဗျူးလုပ်လို့ပါသွားတာတွေ၊ တချို့ထင်မြင်ချက်လေးတွေပြောတာတွေကို တွေ့ပြီး တော့ခေါ်တာလို့ထင်ပါတယ်”ဟုပြောသည်။မည်သည့် အကြောင်းအရာကိုဟောပြောရမည်ဆိုသည်ကို မစဉ်းစားရသေးကြောင်းနှင့် ပြောခွင့်ရမည်ဆိုပါက သခင်သိန်းဖေနှင့်ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများ၏ သူမနာကိုယ်မနာ ညီညွတ်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကို ပြောပြလိုသည်ဟု သခင်လှကွန်း ကပြောသည်။ရှမ်းဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီး ဦးရွှေအုံးကလည်း ဟောင်ကောင်သို့ သွားခွင့်ရပါက ၎င်းရေးသားဖြန့်ချိထားသည့် မပြိုကွဲသင့်သောပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ကြပါဆိုသည့် စာတမ်းကို အခြေခံ၍ ဟောပြောဆွေးနွေးမည်ဟု ခေတ်ပြိုင်သို့ပြောသည်။သခင်တင်မြနှင့် သခင်လှကွန်းတို့သည် ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအဖွဲ့နှင့်လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိ ကြောင်း နှင့် ၎င်းတို့၏ဟောင်ကောင်ခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်ပြောကြားစရာမရှိကြောင်း သခင်သိန်းဖေခေါင်းဆောင် သည့် ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအဖွဲ့ကပြောသည်။၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီး ဦးမင်းလွင် က “ သူတို့က အဘတို့ထဲမှာမပါဘူး။ အမြင်တွေလဲမတူဘူး။ လုံးလုံးကွဲ တယ်။ ဒေါက်တာကျော်ရင်လှိုင်တို့ ရောဘတ်တေလာတို့ကလည်းသူတို့နဲ့ တပေါင်းတစည်းထဲပါ။ ဒီမိုကရေစီအင် အားစုတွေက အထူးသဖြင့် အန်အယ်လ်ဒီက တင်းမာနေလို့ ဒီမိုကရေစီမရတာလို့ အမြင်ရှိသူတွေပါ။ ဒီ အယူအဆကို ရှင်းရှင်း ပြောရရင် သခင်တင်မြတို့ သခင်လှကွန်းတို့က သဘောကျတာ။ အထူးသဖြင့် ဖွဲ့ စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်ရင် မကြိုက်ဘူး။ ကြိုက်တယ်မပြောဘဲနဲ့ မရှိတာထက် ရှိတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အယူ အဆမျိုးရှိသူတွေပါ” ဟုပြောကြားသည်။ရပ်ကွက်အာဏာပိုင်များက မမှန်မုန်တိုင်းသတိပေးချက်ထုတ်ပြန် ရန်ကုန်မြို့ခံများအထိတ်တလန့်ဖြစ်NEJ/ ၂၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၈ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း နအဖစစ်အစိုးရ၏ မမှန် မုန်တိုင်းကြိုတင်သတိပေးချက်ကြောင့် ပြည်သူအများ ထိတ်လန့် စိုးရိမ်ခဲ့ကြသကဲ့သို့ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေကြကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံများက ပြောသည်။ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာ (၂၅) ရက် စနေနေ့ညနေနှင့် ညဘက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ဆင်ခြေဖုံး လှိုင်သာယာ၊ ရွှေပြည်သာ၊ လှည်းတန်းစသည့် မြို့နယ်တို့တွင် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အာဏာပိုင်များက နောက်ထပ် (၃၆) နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းတခု ၀င်စရာရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ပြည်သူများ သတိရှိရှိနေထိုင်ကြရန်နှင့် လိုအပ်သည်များကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြရန် လိုက်လံနှိုးဆော်ခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။လှည်းတန်းတွင် နေထိုင်သူတဦးက “စနေနေ့ ညနေ (၆) နာရီခွဲလောက်က လမ်းထဲမှာ အသံချဲ့စက်နဲ့လှည့်ပြီးအော်တယ်။ နောက်ထပ် (၃၆) နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းကြီးတခု ၀င်နိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့် လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုက်ကြေညာတယ်လေ” ဟု ပြောသည်။ထိုသို့ မြို့နယ်များအတွင်း မုန်တိုင်းသတိပေး နှိုးဆော်မှုများကြောင့် ရန်ကုန်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မုန်တိုင်းဝင်ရန် ရှိ မရှိ၊ မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသို့ ခေတ်ပြိုင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သည်။တာဝန်ခံဖြေဆိုသူက ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်အလယ်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် မုန်တိုင်းငယ်သည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး မြောက်အရှေ့ယွန်းယွန်းသို့ ဆက်လက်ရွေ့ရှားနေကြောင်း၊ ထို့နောက် (၃၆) နာရီအတွင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ကမ်းခြေနှင့် ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အနောက်ဘက်ကမ်းခြေကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ကုန်းတွင်းပိုင်းကို ၀င်ရောက်မည့်အကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်၍ အချို့ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းတို့တွင် မိုးကြီးနိုင်ကြောင်း ဖြေကြားသည်။ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်အချို့တွင် မုန်တိုင်းဝင်မည်ဆိုကာ အသံချဲ့စက်များနှင့် လိုက်လံကြေညာနေခြင်းသည် ၎င်းတို့မိုးလေ၀သဌာန၏ အကြောင်းကြားချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ မုန်တိုင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများကို ၎င်းတို့အနေဖြင့် အကြိမ်ကြိမ် ဖြေကြားနေရကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အဆင့် အာဏာပိုင်များ၏ ညွှန်ကြားချက်အရ ရပ်ကွက်အာဏာပိုင်များက လုပ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း အဆိုပါ ဖြေကြားသူက ပြောသည်။ရပ်ကွက်အာဏာပိုင်များ၏ ကြေညာချက်ကြောင့် ပြည်သူများမှာ နေအိမ်ခေါင်မိုးပြုပြင်ခြင်း၊ တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းများကို လုံခြုံသည့်အဆောက်အဦများဖြစ်သည့် ဘုန်းကြီးကျောင်းများ၊ ဆွေမျိုးနေအိမ်များသို့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း လုပ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။နောက်နေ့ တနင်္ဂနွေထုတ် အစိုးရသတင်းစာများတွင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ မုန်တိုင်းသည် နောက် (၃၆) နာရီအတွင်း အိန္ဒိယနှင့် ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် အနောက်ဘက်ကမ်းခြေကို ဖြတ်ပြီး ကုန်းတွင်းပိုင်းကို ၀င်ရောက်မည်၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်၍ တချို့ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းတို့တွင် မိုးကြီးမည်၊ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွင် တနာရီမိုင် (၄၀) နှုန်းခန့် လေတိုက်ခတ်နိုင်သည်ဟုသာ ဖော်ပြထားသောကြောင့် အာဏာပိုင်များ၏ ကြေညာချက်အရ စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသည့် ပြည်သူများက စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ကြကြောင်း သိရသည်။ယခုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ နာဂစ်မုန်တိုင်း မတိုင်မီကာလနှင့် မုန်တိုင်းပြီးကာလတွင် မိုးလေ၀သဦးစီးဌာန၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို သုတေသနပြုလုပ်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းတခုမှ နိုင်ငံခြားသားသုတေသီတဦးကမူ နအဖအာဏာပိုင်အဖွဲ့၏ ယန္တရားကို ထောက်ပြဝေဖန်သည်။၎င်းက “ အစိုးရအာဏာပိုင်တွေက တကယ်မုန်တိုင်းဝင်မယ့် အခြေအနေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တုန်းကတော့ ပြည်သူတွေကို တိတိကျကျ အသိပေးဖို့၊ လိုအပ်တဲ့ အကူအညီပေးဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့ကြတယ်။ အခု မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မပတ်သက်တဲ့ မိုးလေ၀သသတင်းကိုတော့ မလိုအပ်ဘဲ သတင်းမှားတွေ ပေးနေတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်သူတွေ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ပြီး တကယ့်မုန်တိုင်း ၀င်ရောက်မယ့်အခြေအနေရှိရင် ယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘဲ အသက်အိုးအိမ်တွေ ဆုံးရှုံးမှာ စိုးရိမ်ရတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။အနောက်နိုင်ငံများရှိ မြန်မာစစ်သံမှူးရုံးများကို ပိတ်တော့မည်NEJ/၂၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၈မြန်မာစစ်အစိုးရ ကကကြည်း နိုင်ငံခြားငွေ ပြတ်လတ်နေသည့်အတွက် အနောက်နိုင်ငံများနှင့် ဥရောပနိုင်ငံများရှိ စစ်သံမှူးရုံးများကို မကြာခင် ပိတ်တော့မည်ဟု သံတမန်သတင်းရပ်ကွက်က ပြောသည်။စစ်အစိုးရသည် အနောက်နိုင်ငံများနှင့် ဥရောပနိုင်ငံများရှိ စစ်သံမှူးရုံးများကို ပိတ်ပြီး အာဆီယံနိုင်များဖြစ်သည့် စင်္ကာပူနှင့် ဗီယက်နမ် ၂ နိုင်ငံမှာသာ စစ်သံမှူးရုံး ဖွင့်တော့မည်ဟု ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အရာရှိတဦးကလည်း ပြောသည်။ ကကကြည်းအနေနှင့် နိုင်ငံခြားငွေပြတ်နေသည့်ပြင် စစ်သံမှူးများကို စိတ်မချသည့်အချက်သည်လည်း စစ်သံရုံးများ ပိတ်ရသည့်အခြေအနေ ဖြစ်နိုင်သည်ဟု သံတမန်အသိုင်းအ၀ိုင်းက ယူဆသည်။မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ နိုင်ငံခြားငွေ ပြတ်လတ်နေသည့်အတွက် အိန္ဒိယနှင့် နီပေါနိုင်ငံများရှိ မြန်မာသံရုံးများ ပိတ်ရမည့်ကိန်းဆိုက်နေသည့် သတင်းများထွက်ပြီး မကြာခင် အနောက်နိုင်ငံများနှင့် ဥရောပနိုင်ငံများရှိ စစ်သံမှူးရုံးများကိုပိတ်ဖို့ စစ်အစိုးရမှ စီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။နာဂစ်မုန်တိုင်းအပြီးတွင် နိုင်ငံခြားရေး ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးကျော်သူ ဆားဗီယားနိုင်ငံနှင့် အခြားနိုင်ငံများသို့သွားရောက်ပြီး ငွေချေးဖို့ ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ဟု စုံစမ်းသိရသည်။ဧရာဝတီတိုင်းမှာ စပါးဈေးကျ လယ်သမားများအခက်တွေ့NEJ/ ၂၈ အောက်တိုဘာဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း မိုးစပါးပေါ်ကာစတွင် စပါးအသစ်ဈေးများ ကျဆင်းနေသောကြောင့် လယ်သမားများ အခက်ကြုံနေကြကြောင်း သိရသည်။ပြီးခဲ့သည့်နှစ်၌ စပါးတင်း (၁၀၀) ပေါက်ဈေး ကျပ် (၃) သိန်းခန့်ရှိရာမှ ယခုနှစ်တွင် ကျပ် (၂) သိန်း (၆) သောင်းခန့်သာရှိကြောင်း ဧရာဝတီတိုင်း ၀ါးခယ်မမြို့မှ လယ်သမားတဦးက ပြောသည်။၎င်းက “ကျနော့်လယ် အထွက်စောလို့ နှံကားအမျိုးအစား စပါးကို ကုန်သည်တွေဆီ စပ်ရောင်းတာ၊ ကုန်သည်တွေကရော ဆန်စက်တွေကပါ ဈေးပေးတာ အတော်နိမ့်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ရောင်းလို့မဖြစ်သေးဘူး၊ တခြားလူတွေလည်း ဒီလိုပဲ” ဟု ပြောသည်။မိုးစပါးအသစ်များ လက်ငင်းတွင် ဈေးနိမ့်နေသော်လည်း ပေါ်ဆန်းမွှေး ဆန်ကောင်းများမှာမူ ဆန်ဈေးရော စပါးဈေးပါ အလွန်မြင့်နေပြီး အိမ်အရောက်ပို့ သန့်စင်ပြီးပေါ်ဆန်းမွှေး တတင်းခွဲတအိတ်လျှင် ကျပ် (၄) သောင်း (၁) ထောင်ထိဈေးပေါက်နေကာ ပေါ်ဆန်းမွှေးစပါးကလည်း ဧရာဝတီတိုင်းမှာတင် ကျပ် (၇) သိန်းကျော် ပေါက်ဈေးရှိကြောင်း ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်မှ ဆန်ကုန်သည်ကြီးတဦးက ပြောသည်။ယခုကဲ့သို့ ဆန်ကြမ်းစပါးဈေး ကျဆင်းရခြင်းသည် မိုးကာလတလျှောက်လုံး ဧရာဝတီတိုင်းမှ ရေစိုဆန်ဝါများ ဈေးကွက်ထဲ အဆက်မပြတ်ဝင်ရောက်လာခြင်း၊ နာဂစ်လေဘေးကာလအတွင်း အဓိကပျက်စီးသည့်ဆန်များမှာ ပေါ်ဆန်းကဲ့သို့ ဆန်အကောင်းစားများဖြစ်ခြင်း၊ ကုလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်မှ လေဘေးကူညီမှုအဖြစ် ဆန်များအိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ၀ယ်ယူတင်သွင်းခြင်း စသည့်အချက်များကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ဆန်ကုန်သည်များက ရှင်းပြသည်။ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တဦးက “ခုလို ဆန်ကြမ်းစပါးဈေးတွေကျပြီး လယ်သမားတွေ ထိုက်သင့်သလောက်မရရင် အကြွေးပတ်လည် ၀ိုင်းနေမယ်၊ စီးပွားရေးဘ၀ မတိုးတက်ဘူး။ နောက်နှစ်တခြားဟာ ပြောင်းစိုက်မယ်ဆိုတာမျိုး ဖြစ်လာမယ်။ လယ်ယာစီးပွားရေးထိခိုက်မှာ ဖြစ်သလို နိုင်ငံစီးပွားရေးကိုလည်း ထိခိုက်တာဖြစ်တယ်ဟု” ပြောသည်။လောလောဆယ် ဆန်ကြမ်း မိုးစပါးဈေး အလွန်အမင်းကျဆင်းနေသော်လည်း လာမည့် (၂) လအတွင်း ဧရာဝတီတိုင်းမှ စပါးထွက်အခြေအနေကို ကြည့်ပြီးမှသာ စပါးဈေးအမှန်ကို သိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆန်ကုန်သည်များက ပြောသည်။ယခုလနှောင်းပိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း (၀ါးခယ်မ) စပါးပေါက်ဈေးမှာစပါးတင်း (၁၀၀) ဈေးနှုန်း၁။ မိုးနှံကား စပါး (၂၆၀,၀၀၀) ကျပ်၂။ နွေနှံကားဟောင်း (၃၀၀,၀၀၀) ကျပ်၃။ နှံကားအဟောင်း (၃၂၀,၀၀၀) ကျပ်၎။ ပေါ်ဆန်းဟောင်း (၇၁၀,၀၀၀) ကျပ်၅။ မနော ဆန်ချောအဟောင်း (၅၆၀,၀၀၀) ကျပ်၆။ ဧရာဝတီ ပေါ်ဆန်း (၆၅၀,၀၀၀) ကျပ်၇။ ရွှေဝါယဉ်အဟောင်း (၆၆၀,၀၀၀) ကျပ်၈။ ကောက်ကြီး (၄၃၀,၀၀၀) ကျပ်မြန်မာ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံများ ဆွေးနွေးပွဲ အာရှဒေသတွင်း ကျင်းပဖို့ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ တိုက်တွန်း28 October 2008ဦးကျော်ကျော်သိန်းမြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ ရည်မှန်းချက် တိတိကျကျနဲ့ အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ချမှတ်ပြီး လုပ်ဆောင်ဖို့ အဝေးရောက် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ (NCGUB) က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လက်ရှိ လုပ်ဆောင်နေတာတွေကနေ အစီအစဉ်အသစ်တခုကို အဆိုပြု တင်ပြလိုက်ပါသေးတယ်။ကိုကျော်ကျော်သိန်းက အပြည့်အစုံ တင်ပြထားပါတယ်။NCGUB က အဆိုပြုတင်ပြလိုက်တဲ့ အစီအစဉ်အသစ် ဆိုတာကတော့ မြန်မာ့အရေးကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မိတ်ဆွေနိုင်ငံများအုပ်စု ဆွေးနွေးပွဲတွေကို အာရှဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေမှာ ကျင်းပသွားဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ကျင်းပပြီးစီးသွားတဲ့ အာရှ-ဥရောပ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီး ထုတ်ပြန်တဲ့ သဘာပတိ ကြေညာချက်ထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထည့်သွင်းပြောဆိုထားတဲ့အပေါ်NCGUB ရဲ့ တုံ့ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာ အဲဒီလို အဆိုပြုတင်ပြထားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စဆိုင်ရာ မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အသေးစိတ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ပြီး အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ချက်နဲ့အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆိုရင် နိုင်ငံတကာအင်အားစုတွေကြားမှာ အတော်ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်သေးတယ်၊ ကွာဟမှုတွေ နည်းနိုင်သမျှနည်းပြီး ထိရောက်တဲ့ သံတမန်ရေး ဖိအားပေးမှုတွေ လုပ်နိုင်ဖို့ အစည်းအဝေးတွေကို နယူးယောက်မှာတင် လုပ်မနေဘဲ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေမှာပါလုပ်ဖို့ အဆိုပြုတင်ပြတာဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာသောင်းထွန်းက ဆိုပါတယ်။NCGUB ကုလသမဂ္ဂရေးရာ ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာသောင်းထွန်း။"ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေမှာ အထူးသဖြင့် ကမ္ဘောဒီးယားကိစ္စကို ဖြေရှင်းတုန်းကဆိုရင် နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေးတွေကို ဒေသတွင်းက နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားတို့ ထိုင်းတို့ကနေပြီး ဂျကာတာတို့ဘန်ကောက်တို့မှာ ကမကထလုပ်ပြီး ကျင်းပတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဟာတွေကို ပြန်ဖော်ထုတ်ပြီး မြန်မာ့အရေးကိစ္စမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံ မိတ်ဆွေများအဖွဲ့အစည်းအဝေးတွေကို အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ ကျင်းပသင့်ပါတယ်။"ဒါမှလည်း နအဖအနေနဲ့ မြန်မာပြည်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာ အနောက် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကတင် တွန်းလာတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေ၊ သူတို့နဲ့ မိတ်ဆွေသဘောမျိုး ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကပါ တွန်းအားပေးလာမှု ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သူတို့ ပိုမြင်လာမယ်၊ သံတမန်ရေးအရ တွန်းအားပေးမှုတွေဟာ ပိုပြီးတော့ ဟန်ချက်ညီလာမယ်၊ ပိုပြီးတော့ထိရောက်မှုရှိလာနိုင်မယ်လို့ မြင်ပါတယ်။"တရုတ်နိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့တဲ့ ASEM ခေါ် အာရှ-ဥရောပ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကနေ မြန်မာ့အရေးကိစ္စကို အထူးတလည် ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက် အသိအမှတ်ပြုပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှု လျော့နည်းနေတယ်လို့ ဝေဖန်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရင်ကဆိုရင် ASEM အစည်းအဝေးတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို တက်ရောက်ခွင့်မပြုဘူး၊ ပြုရမယ်ဆိုတဲ့အပေါ် အငြင်းပွားတာတွေတောင်ဖြစ်ခဲ့ကြဖူးပြီး အခုဆိုရင် မြန်မာ့မဟာမိတ် တရုတ်က အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးကနေ မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စ ဘာမှမပြောတာထက်စာရင် အခုလို ထည့်သွင်းပြောဆိုတာက ပိုမကောင်းပါဘူးလား၊ ဒေါက်တာသောင်းထွန်းကတော့ ဒီလိုထည့်ပြောတာကို ကြိုဆိုပြီး မြန်မာ့အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ တရုတ်အပါအ၀င် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့မူဝါဒပိုင်းမှာ အပြောင်းအရွေ့ ဖြစ်လာတာကိုတော့ သတ်ိထားမိပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။"နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီဘက်မှာ တစုံတရာ တိုးတက်မှုတွေ ဖြစ်လာတယ်လို့ ကျနော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်က သတိပြုမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု မြန်မာပြည်အရေးကိစ္စဟာ လာမယ့်တနှစ် နှစ်နှစ်အတွင်း ကြီးမားတဲ့ အချိုးအကွေ့တွေ ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားမှာ ကြေညာချက်တွေရဲ့ အနှစ်သာရ၊ ကြေညာချက်တွေဟာ စကားလုံးသာမန်မျှမဖြစ်သင့်တော့ဘဲ အဲဒီအနှစ်သာရတွေကို တကယ်လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဘက် အချိန်ဇယားနဲ့ အချိန်ကာလကို ခေါင်းထဲမှာထည့်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်တဲ့ဟာတွေ ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း မြန်မာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီရေး ပြောင်းလဲမှုဟာ ကာလတိုအတွင်း အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မယ့်အနေအထားရှိတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။"ASEM အစည်းအဝေးကနေ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးကို အားပေးတိုက်တွန်းတဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မျိုး ထွက်လာပေမယ့် ဒီအစည်းအဝေးမှာပါဝင်တဲ့ တရုတ်၊ အိန္ဒိယနဲ့ ထိုင်းတို့လိုအစိုးရတွေဟာ မြန်မာအစိုးရနဲ့ စီးပွားကုန်သွယ်ရေးတွေ တက်တက်ကြွကြွ ပူးတွဲလုပ်ဆောင်နေပြီး စစ်အစိုးရ ဆက်ပြီးရှင်သန်နိုင်ရေး လိုအပ်တဲ့ အခြေခံအဆောက်အအုံတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ လုပ်နေကြတာကြောင့် ဒါဟာ ASEM ရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ ရှင်းရှင်းကြီးကို ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ NCGUB က ထောက်ပြထားပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် တဖက်မှာ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံတာတွေလုပ်ပြီးတဖက်မှာလည်း ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းတောင်းဆိုတာတွေ တပြိုင်တည်း မလုပ်နိုင်ပါဘူးလား၊ စီးပွားရေးအရ ဆက်သွယ်မှုတွေအပေါ် အခြေခံပြီး ဖြစ်လာတဲ့ နီးစပ်မှုအရ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ တွန်းအားပေးတာတွေ လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ဒေါက်တာသောင်းထွန်းက သဘောတူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေရှည်အမြင်နဲ့ လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။"ရေတိုအမြင်နဲ့ မြန်မာပြည်က သယံဇာတ ခေါင်းပုံဖြတ်လို့ရရင် တော်လောက်ပြီဆိုပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည်ဟာ ချွတ်ခြုံကျတဲ့ နိုင်ငံတခု ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသက်ရောက်မှုတွေက မြန်မာပြည်နယ်စပ်နဲ့တင် ရပ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေလည်း ထိခိုက်မယ်။ တဖက်မှာ စီးပွားရေး၊ သံတမန်ရေးအရ နီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံမှုနဲ့ အဲဒီဆက်ဆံမှု အခြေခံပေါ်မှာ မြန်မာပြည် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးပေါ်မှာ အခြေခံတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတခု၊ ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲမှုတခု၊ ဒါ ဘယ်ဘက်မှနာစေ၊ သာစေ မဟုတ်ပါဘူး။"တိုင်းပြည်အတွက်လည်း ပိုကောင်းလာမယ်၊ ပြည်သူလူထုအတွက်လည်း ပိုကောင်းလာမယ်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေ အနေနဲ့လည်း မြန်မာပြည်ဟာ သိုးမည်းတကောင်မဖြစ်ဘဲ ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးအတွက်ဖြစ်စေ၊ ဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုးမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမှာဖြစ်ဖြစ် ဒီ့ထက်ပိုပြီးတော့ လုပ်လာနိုင်မယ့် အနေအထားတွေ ရှိတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ နီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံမှုအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ပါးစပ်နဲ့ပြောနေတာတင် မကဘဲနဲ့ လက်တွေ့တွန်းအားပေးမှုတွေ လုပ်သင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ အခုထိတော့ မလုပ်သေးတဲ့အတွက် ကျနော်တို့အနေနဲ့ အများကြီး အားမလိုအားမရ ဖြစ်ပါတယ်။"အဝေးရောက် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရရဲ့ ကုလသမဂ္ဂရေးရာကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာသောင်းထွန်း ပြောပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍သာ အခု အဆိုပြုတင်ပြသလို ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာ့အရေးမိတ်ဆွေနိုင်ငံများအစည်းအဝေးတွေကို ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေမှာ လှည့်လည်ကျင်းပပြီး ထိထိရောက်ရောက် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့် လက်ရှိအခြေအနေထက် ပိုပြီးထိရောက်မှုရှိလာမယ်လို့ NCGUB က ပြောပါတယ်။ဆီးရီးယားစီးနင်းမှုမှာ အယ်လ်ကိုင်းဒါး လက်နက်မှောင်ခိုခေါင်းဆေင် သေဆုံး28 October 2008ဆီးရီးယားနိုင်ငံထဲကို အမေရိကန် ရဟတ်ယာဉ်တွေ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကဆီးရီးယားနိုင်ငံ နယ်စပ်ကတဆင့် အီရတ်နိုင်ငံထဲကို နိုင်ငံခြားသား တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေနဲ့ လက်နက်တွေ ခိုးသွင်းနေတဲ့ ကွန်ယက်အဖွဲ့က ခေါင်းဆောင် သေဆုံးသွားတယ်လို့ ယူဆရကြောင်း အမေရိကန် အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေ ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သူဟာ အဘူ ဂါဒီယာ(Abu Ghadiya) ဆိုသူဖြစ်ကြောင်း အမည်မဖော်လိုတဲ့ အမေရိကန်အရာရှိကိုကိုးကားပြီး အမေရိကန် သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ဖော်ပြနေကြပါတယ်။ ဂါဒီယာဟာအီရတ်မှာရှိတဲ့ အယ်လ်ကိုင်းဒါးအဖွဲ့ကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးနေသူဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက အစောပိုင်းတုန်းက သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဆီးရီးယားနိုင်ငံသား အရပ်သား၈ ယောက် သေဆုံးခဲ့မှုဟာ အမေရိကန်ရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ဆီးရီးယားနိုင်ငံက စွပ်စွဲပြောဆိုထားပါတယ်။ အဲဒီ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုဟာတနင်္ဂနွေနေ့ နေ့ခင်းကြောင်တောင်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့် ဒါဟာ မှားယွင်းတိုက်ခိုက်မှုမဟုတ်ဘဲ တမင်ကြိုတင်ကြံစည်ပြီးမှ တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာကို ပြသလိုက်တာပဲလို့ ဆီးရီးယားနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ၀ါလစ်ဒ် အယ်လ်-မူလမ်(Walid al-Muallem) က လန်ဒန်မြို့မှာ မနေ့က ပြောခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုအပေါ် မြန်မာစစ်အစိုးရ ဝေဖန်ခံရ27 October 2008မြန်မာစစ်အစိုးရက ဦးဆောင်ရေးဆွဲထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အသစ်ထဲမှာအမျိုးသမီးနဲ့ အမျိုးသား တန်းတူညီမျှရေးကို မြှင့်တင်ဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အစီရင်ခံစာတွေကို CEDAW လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးများအပေါ် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေး ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကော်မတီကို တင်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်။WLB လို့ခေါ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်ကလည်း ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကြေညာချက်တစောင်ကို ဒီကနေ့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အခုလို အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားတန်းတူညီမျှမှုတွေကို စစ်အစိုးရရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေမှာ မြှင့်တင်ဖို့ ပျက်ကွက်တာဟာအစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာ စစ်တပ်ဘက်က ၂၅% နေရာယူထားလို့ပဲလို့ ဆိုပါတယ်။မြန်မာ့လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ အမျိုးသားတွေကပဲ ရှေ့တန်းက နေရာရတယ်၊ စစ်တပ်ကြီးစိုးမှု ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်၊ စစ်တပ်မှာလည်း အားလုံးလိုလိုဟာ အမျိုးသားတွေပဲလွှမ်းမိုးထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။CEDAW အဖွဲ့ကနေပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရက ဒီနှစ်တင်သွင်းတဲ့ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာကို ကန့်ကွက်ပေးဖို့ The Global Justics Center လို့ခေါ်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်ခ်မြို့ အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားတဲ့ ရှေ့နေအဖွဲ့က တိုက်တွန်းထားပါတယ်။မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ တိုက်တွန်းမှုတွေကို မလိုက်နာရုံမက အမျိုးသမီးတွေကိုအဓမ္မပြုကျင့်မှုနဲ့ တခြားပြစ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေက အရေးယူဖို့စိတ်မပါကြဘူးလို့ The Global Justice အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ကျရင် CEDAW အဖွဲ့ရဲ့ ၄၂ ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကို ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။မောင်တောတွင် ရဟန်းတော် ၂ ပါးကို နစကမှ အပြင်းအထန်လိုက်ရှာနေ10/28/2008ရခိုင်ပြည်နယ် အနောက်ဘက် နယ်စပ်မြို့ မောင်တောတွင် ရဟန်းတော်နှစ်ပါးအား နစကများက အသည်းအသန် လိုက်ရှာနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။အမည်မဖေါ်လိုသူ ရဟန်းတော် တပါးက“သူတို့နှစ်ပါးကို ကျောင်းတိုင်းကျောင်းတိုင်းမှာ လိုက်မေးနေပါတယ်။ အဲဒီ ရဟန်းနှစ်ပါး လာရောက်တည်းခိုနေသလား၊ မြင်မိသလား တွေ့မိသလားဆိုပီး နစကတွေက မေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။” ဟု ပြောသည်။အဆိုပါ ရဟန်းတော်နှစ်ပါးမှာ ဦးဇ၀နနှင့် ဦးသုမနတို့ဖြစ်ပြီး စစ်တွေမှ မောင်တောသို့ တနင်္ဂနွေနေ့ကရောက်ရှိ်လာသော ရဟန်းတော်များ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။မည့်သည့်အတွက်ကြောင့် လိုက်ရှာနေသည်ကို တိတိကျကျ မသိရသေးသော်လည်း စစ်ဆေး မေးမြန်းရန် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း အဆိုပါရဟန်းတော်က ပြောသည်။ယခုအချိန်ထိ ရဟန်းတော်နှစ်ပါးအား ရှာဖွေမတွေ့သေးသဖြင့် မောင်တောမြို့မှ ဘုန်းတော်င်္ကြီးကျောင်းများတွင် ဆက်လက် လိုက်လံရှာဖွေနေကြောင်း သိရသည်။
ဆောင်းပါး ရွှေအိမ်စည် အင်္ဂါနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 28 2008 15:33 - မြန်မာစံတော်ချိန် မဲဆောက်မှ အုန်းဖျန်သို့ ထွက်သည့် ခရီးသည်တင်ကားများက နေ့စဉ်နံနက် ၇-နာရီခွဲတွင် မဲဆောက်မှစ၍ ထွက်သည်။ တနာရီခြားတစီး ပုံမှန်ထွက်၏။ မွန်းလွှဲပိုင်း သုံးနာရီခွဲအထိ ရှိသည်။ လိုင်းကားများက `တိုယိုတာ ဟိုင်လက် ၅-ချိပ်`ကားငယ်လေးများ ဖြစ်သည်။ လမ်းက ….အတက်၊ အဆင်း၊ အကွေ့၊ အကောက်များ၏။ …..လှိုင်းလုံးကြီးများသဖွယ် …..။ စွေ့ခနဲ မြောက်၍ တက်သွားသည်လည်း ရှိ၏။ ပြီးလျှင် ….. ငြိမ့်ခနဲ ပြန်၍ ဆင်းပြန်၏။ တက်ရင်းနှင့် ကွေ့သည်။ ကွေ့ရင်းနှင့် ဆင်းပြန်၏။ မလွယ်…..။မဲဆောက်မှ ၄၈-ကီလိုအထိမူ လမ်းက မြေပြင်ညီလမ်းဖြစ်သည်။ လမ်းကောင်း၏။ ၄၈-ကီလိုလွန်လျှင် လမ်းသည် တောင်ပေါ်သို့ တက်ပြီ။ အကွေ့အကောက် အဆင်းအတက်များအား ဖြတ်ရပြီ။ယခင်ကမူ ဤလမ်းကြောင်း၌ ခရီးသည် အသွားအလာ မများလှ…..။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာတွင် မဲဆောက် UNHCR ရုံး၌ အမည်စာရင်း တင်သွင်းထားကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား အုန်းဖျန် ဒုက္ခသည်စခန်းနှင့် နို့ဖိုး ဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ PAB နှင့် UNHCR မှ ပို့ဆောင်ခဲ့သည့် နောက်ပိုင်းတွင်မူ ဤလမ်း၊ ဤခရီးသည် အသွားအလာ များလာခဲ့တော့သည်။ နောက်ပိုင်း PAB နှင့် UNHCR ၏ အစီအစဉ်နှင့် မဟုတ်ဘဲ မိမိဘာသာမိမိ ၀င်ရောက် နေထိုင်ကြသည့် သူများနှင့် …..ဤခရီးလမ်းက `သာ` ၍နေတော့သည်။ကားဘေးသို့ `စံမလော့` နှစ်စီး ဆိုက်လာသည်။ `စံမလော့` ပေါ်မှ ပစ္စည်းများ ကားပေါ်သို့ တင်ကြသည်။ ပစ္စည်းများက များ၏။ အိမ်ထောင် ပြောင်းသကဲ့သို့ …..။ လူကလည်း များသည်။ ခလေးငယ်များက လေးယောက်၊ ဆယ့်သုံးနှစ် ဆယ့်လေးနှစ်အရွယ် မိန်းမငယ်များက သုံးယောက် ….။ ပြီးလျှင် ….အသက်လေးဆယ်ခန့် အမျိုးသမီးက နှစ်ယောက် …..။ ကားငယ်လေးအတွင်း လူပြည့်သွား၏။ သူတို့ကား …. အိန္ဒိယနွယ်ဖွား မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလမ် ဘာသာဝင်များ ဖြစ်သည်။လူပြည့်ပြီဖြစ်၍ ကားသည်ဂိတ်မှ စ၍ ထွက်သည်။ မိုးမရွာသဖြင့် ကားဘေးမိုးကာများအား လိပ်တင်ထားသဖြင့် လေ၀င်လေထွက် ကောင်း၏။ အ၀ိုင်းတခုအား ပတ်၍ ကားသည် အာရှလမ်းမပေါ်သို့ တက်သည်။ မြို့ပြ၏ လမ်းမများပေါ်မှ ဆင်ခြေဖုံး…..။ ကတ်ပိဘန်းရွာလေးအား ကျော်ခဲ့ပြီ။ ကတ်ပိဘန်းရွာက မဲဆောက်၏ အ၀င်အ၀ရွာငယ်လေး….။ မြို့နှင့်တဆက်တည်း ထိစပ်နေသည့်ရွာ….။ ကတ်ပိဘန်းလွန်လျှင်….မယ်ကု….။ကားငယ်လေးအတွင်း၌ ထိုင်းလူမျိုး ခရီးသည်တဦးမျှမပါ။ အားလုံး မြန်မာပြည်သားများ….။ အုန်းဖျန် ဒုက္ခသည်သို့ သွားမည့်သူနှင့် နို့ဖိုးဒုက္ခသည် စခန်းသို့ သွားကြမည့်သူများသာ …..။ ကားပေါ်၌… နောက်ဆုံး တက်လာခဲ့ကြသည့် ခလေးတွေ အများကြီးနှင့် သူတို့ မိသားစုက စိတ်ဝင်စားစရာ။ သူတို့ အချင်းချင်းပြောနေသည့် စကားသံများအား နားစွင့်၍ နေမိတော့သည်။`ညက ငါတို့အိပ်တဲ့အိမ်နဲ့ ကားဂိတ်… နီးနီးလေးကို စံမလော့သမားက လိုက်ပတ်နင်းနေပြီး နှစ်ရာတောင် တောင်းတယ်``အဒေါ်က ပေးလိုက်တာကိုး``ဟဲ….. မပေးလို့ ရမလား။ စံမလော့သမားက မပေးရင် ….ရဲကို အကြောင်းကြားလိုက်မယ်လို့ ပြောတာကိုး…..`သူတို့အထဲမှ ၁၂-နှစ်အရွယ် ကောင်လေးနှင့် အသက်လေးဆယ်ခန့်ရှိ ခပ်၀၀ သားသည် မိခင်တို့ ပြောနေကြသည့်အား ကြားရ၏။`နင်တို့က ဘယ်သွားကြမလိုလဲ….`ကားပေါ်မှ အသက်ခြောက်ဆယ်ခန့်ရှိ အမျိုးသမီးကြီးတဦးက သူတို့အား စပ်စုလိုက်သည်။ ဤအမျိုးသမီးကြီးက နို့ဖိုး ဒုက္ခသည်မှ ဖြစ်သည်။ စခန်းသစ်ကျပြီး နို့ဖိုး ဒုက္ခသည်စခန်း စတည်ကတည်းက နို့ဖိုးတွင်ပင် နေလာခဲ့သည့်သူ….။ သူမသည်လည်း အိန္ဒိယနွယ်ဖွား မြန်မာပြည်သား အစ္စလမ် ဘာသာဝင်တဦးပင် ….။ နို့ဖိုးတွင် ဈေးဆိုင် တည်ထား၏။ သူ့ဆိုင်က …. ရေဒီယို၊ ကက်စက်၊ နာရီမှအစ အိုးခွက် ပုဂံအထိ ရောင်းသည်။ သူမသည်လည်း UNHCR အစီအစဉ်နှင့် တတိယနိုင်ငံ တခုသို့ ပြောင်းရွှေ့ အခြေချရန် စီစဉ်ထား၏။ အမေရိကန်က ငြင်းပယ်ခဲ့သဖြင့် သြစတြေးလျသို့ ခိုလှုံခွင့်ရရန် အဆိုပြုထားသည်။`ကျမတို့က မုဒုံကပါ…. မနေ့ညကမှ မဲဆောက်ကို ရောက်တယ်။ မောင်က ဖုန်းဆက်ပြီး လှမ်းခေါ်လို့လေ…. မောင်နဲ့ အဆက်အသွယ် ပျက်နေတာကြာပြီ၊ ဆယ့်ငါးနှစ်လောက်တောင် ရှိပြီ။ သူတို့လည်း နိုင်ငံခြား သွားတော့မယ်။ နင်တို့လည်း သွားချင်ရင်လာ ဆိုတာနဲ့ လာခဲ့တာ …..။ သူက ကျမနဲ့ အတူတူ မုဒုံမှာ ဈေးရောင်းနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ….။ သူကလည်း နင်တို့သွားရင် ငါလည်းလိုက်မယ် ဆိုတာနဲ့ နှစ်ယောက်သား ခလေးတွေခေါ်ပြီး ထွက်လာခဲ့တာ….`ခပ်၀၀နှင့်အမျိုးသမီးက သူမ၏ဘေးတွင် ထိုင်နေသည့် ပိန်ပိန်နှင့် အမျိုးသမီးအား လက်နှင့်ပုတ်ရင်း ပြောသည်။ ပိန်ပိန်နှင့် အမျိုးသမီးက ခလေးငယ်အား ရင်ခွင်အတွင်း ပွေ့ချီထားရင်း …. ပြုံး၍ ခေါင်းညိတ်ပြသည်။`ဒါ အားလုံးက ကျမ ကလေးတွေပဲ….သူ့ခလေးက ဒီနို့စို့တယောက်ပဲ….။ သူ့ယောက်ျားလည်း မရှိတော့ဘူး….. ကျမယောက်ျားလည်း ဘန်ကောက်တက်မယ် ဆိုပြီး ထွက်သွားတာ လေးငါးနှစ်ရှိပြီး ပြန်လည်း မဆက်သွယ်ဘူး…. ကျမတို့ဘာသာ လုပ်စားနေကြရတာ….``မုဒုံ…. ကားဂိတ်မှာ အကြော်ကြော်တယ်။ သူတို့တွေက ရောင်းပေါ့….`ဝဝနှင့် အမျိုးသမီးက အပျိုဖော်ဝင်စ သမီး ၃-ယောက်ကို လက်ညိုးထိုးပြရင်း ပြော၏။ မုဒုံကားဂိတ်က စည်ကားသည့် ကားဂိတ်တခု ဖြစ်သည်။ မော်လမြိုင်၊ သံဖြူဇရပ်၊ ထားဝယ်လမ်းကြောင်းပေါ်၌ ရှိသည်။ ပြီးလျှင် ….တံခွန်တိုင်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီး လမ်းပိုင်းသို့ ထွက်သည့် ကားများလည်း ဂိတ်ထိုးရာ ဖြစ်သည်။ ဤကားဂိတ်၌ သူတို့သည် အကြော်ကြော်၊ အကြော်ဗန်း ခေါင်းပေါ်တင်၍ လှည့်ရောင်းကြ၏။ ဤနည်းနှင့် …. ဤမုဆိုးမ၊ ဤတခုလပ်တို့သည် သားသမီး ခုနှစ်ယောက်၊ ရှစ်ယောက်အား ရှာဖွေ ကျွေးမွေးနေခဲ့ကြ၏။ ယခုမူ …. အားလုံးကို ထားရစ်ပြီး မောင်ခေါ်ရာ အရပ်ဆီသို့ ထွက်ခဲ့ကြပြီ…..။ မည်သည့်အရပ်ဟူ၍ မသိ….။ မည်သို့ သွားရမည်နည်း….။ နေရာသစ်တွင် မည်သို့ အခြေချနေရမည်နည်း….။ မသိ….။ မောင်ခေါ်ရာသို့ လိုက်လာခြင်းမျှသာ ….။ သူတို့တွေအား မဲဆောက်တွင် လာရောက်ကြိုသည်က ဆယ်နှစ် နှစ်အရွယ် မောင်၏သား….။ သူမ၏တူ ….။`ဘာလက်မှတ်ပါလဲ ….`တယောက်က မေးသည်။ သူတို့က …. မနေ့က မြ၀တီမှ မဲဆောက်သို့ ဖြတ်ကူးခဲ့သည်။ နယ်စပ်ဖြတ်ကူးခွင့် လက်မှတ် အပြာရောင်ကဒ်လေးအား ထုတ်ပြသည်။ ဤကဒ်ပြားက မနေ့ကပင် သက်တမ်း ကုန်ဆုံး၍ သွားပြီ။ သုံး၍မရတော့….။ ဤလက်မှတ်နှင့်လည်း ဤလမ်းခရီးအား သွား၍မရ….။ သူတို့ ဘာမျှမသိကြ….။ ဤလမ်းခရီးတွင် ထိုင်းပုလိပ် ဂိတ်ပေါင်းများစွာ ရှိသည်။ ထိုင်းအာဏာပိုင် တယောက်ယောက်၏ ခရီးသွားခွင့် လက်မှတ် မပါလျှင် သွား၍ မရ…။ ဆွဲချထားလိမ့်မည်။ အချုပ်သို့ ပို့မည်။ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း တရားမ၀င် ၀င်ရောက်မှုနှင့် ရုံးတင်မည်။ အနည်းဆုံးတော့ ၁၂-ရက် ထောင်ချခြင်း ခံရမည်။ ပြီးလျှင်မူ …. မြ၀တီသို့ ပြန်ပို့မည်။ ဤသည်တို့အား သူတို့ သိပုံမရ….။ကြောက်ကြောက်ရွှံရွှံတော့ ဖြစ်နေပုံရသည်။ မျက်ဝန်းများအတွင်း စိုးရွှံမှုများအား တွေ့ရ၏။ အရှေ့တွင် …. မယ်ကုရွာအ၀င်ရှိ ပုလိပ်ဂိတ်အား ဖြတ်ရမည်။ ကားသည် `ဘွန်ချိုင်း` အထည်ချုပ်စက်ရုံအား ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီ။ `ဘွန်ချိုင်း` စက်ရုံလွန်လျှင် …..`မယ်ကု`….ဂိတ်။ မယ်ကုဂိတ်က လမ်း၏ လက်ယာဖက်တွင် ရှိသည်။ ယာဉ်ကြော၏ လက်ယာယာဉ်ကြော၌…..။ ကားက လက်ဝဲဖက်ယာဉ်ကြောမှ မောင်းလာ၏။ လက်ဝဲဖက်ယာဉ်ကြောမှ ကားများအား စစ်လျှင်မူ ပုလိပ်နှစ်ယောက်၊ သုံးယောက်သည် ပုလိပ်ဂိတ်၏ မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိ ဗံဒါပင်အောက်၌​ခုံများနှင့် ထိုင်စောင့်၍ စစ်ကြ၏။ မိုးရွာလျှင်မူ သူတို့မထွက် ….။ ကားသည် အရှိန်အား လျော့လိုက်၏။ ဂိတ်အရှေ့ ယာဉ်ကြောတွင် ချထားသည့် သံဆူးကြိုး တံတိုင်းငယ်များအတွင်း ကွေ့၍ ကောက်၍ မောင်းဝင်နေသည်။ ကောင်းကင်သည် ချက်ချင်းပင် ရေအိုးအား သွန်ချလိုက်သကဲ့သို့ ….. မိုးရွာချလိုက်သည်။ ဗံဒါပင်အောက်၌ ပုလိပ်များမရှိ….။ သံဆူးကြိုး တံတိုင်းငယ်များအား လွန်လေပြီ….ကားအရှိန်အား မြှင့်လိုက်၏။သူတို့အားလုံး သက်ပြင်းရှည်အား ချလိုက်ကြသည်။ မယ်ကုဂိတ်တော့ လွန်ပြီ…..။`တဂိတ်တော့ လွန်သွားပြီ၊ အုန်းဖျန်အထိဆိုရင် အရှေ့မှ ပုလိပ်ဂိတ် ၃-ဂိတ် ကျန်သေးတယ်….`ကားအတွင်း စကားသံများ ပြန်၍ ထွက်လာသည်။ အသက်ရှုသံတို့ ပြန်၍ မှန်လာကြပြီ။ မယ်ကုဂိတ် အနားဖြတ်ခါနီးချိန်၌ ရေအိုးမှောက်ရွာချခဲ့သော မိုးသည် ချက်ချင်းပင် တိတ်၍ သွားပြန်သည်။`အရှေ့မှာ `ကြာလေခို့` ပုလိပ်ဂိတ်ရှိတယ်။ အရမ်းဆိုးတယ်။ …. လက်မှတ်မပါလို့ကတော့ အတင်းဆွဲချတာပဲ …။ ... ပိုက်ဆံများများ မတွေ့စေနဲ့ ``အသက်ကြီးကြီး အစ္စလမ် အမျိုးသမီးကြီးက သူတို့တတွေအား ပြောနေသည်။`မုဒုံမှာရှိတဲ့ အိမ်လေးရောင်းလာတာ…. သုံးသိန်းလောက် ရတယ်။ အဲ့ဒါ အကြွေးလေးဘာလေး ဆပ်ပြီး နှစ်သိန်းလောက်တော့ ပါလာတယ်။ ကားခနဲ့…..ပြီးတော့ ….မှတ်ပုံတင်မရှိတော့ တလမ်းလုံးကားတခါရပ်၊ တယောက်ကို တထောင်ပေးလိုက်နဲ့ မြ၀တီရောက်တော့ …..တသိန်းနဲ့ သုံးသောင်းပဲ ကျန်တော့တယ်။ အဲ့ဒါလေးကို ဘတ်ငွေလဲပြီး လာခဲ့တာ….``ပြောရင်း ….. ခပ်၀၀ အမျိုးသမီးသည် ဘတ်ငွေတထောင်တန်လေး နှစ်ရွက်အား ချွေးခံအင်ကျီအတွင်းလိပ့်၍ ထိုးထဲ့နေ၏။ကားသည် `ဖုတ်ဖမြို့`လမ်းခွဲသို့ လွန်ခဲ့လေပြီ။ ဖုတ်ဖလမ်းခွဲအား လွန်လျှင် …..နာမည်ကြီးသည့် `ကြာလေးခို့`ပုလိပ်ဂိတ်…..။ မိုးကမသည်း…..ဖွဲဖွဲနှင့်သာ စွေနေသည်။ ကားဘေးရှိ မိုးကာများ ချထားသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်အား မမြင်ရ….။ ကား၏ အနောက်ပိုင်း…. မှတဆင့် ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသာ တွေ့ရ၏။ အရှေ့ကိုမူ မတွေ့ရ….။ `ကြာလေးခို့` ဂိတ်က လမ်း၏ လက်ဝဲဖက်တွင် ရှိသည်။ လမ်းမကြီးက အသွားလမ်း၊ အပြန်လမ်း…. နှစ်လမ်းမောင်း လမ်းမကြီး ဖြစ်သည်။ ယခုသွားနေသော ယာဉ်ကြောလမ်းက လက်ဝဲဘက် ယာဉ်ကြောမှ ဖြစ်သည်။ ပုလိတ်ဂိတ်နှင့် တဖက်တည်း….။ မိုးက ထင်သလောက်မသည်း….။ ပြိုပါတော့လား မိုးရယ်….။ ကားသည် တဖြည်းဖြည်း`ကြာလေးခို့`ဂိတ်နှင့် နီးလာပြီ။ သုံးမိစ်…. နှစ်မိနစ်… တမိနစ်…. စက္ကန့် ၆၀… စက္ကန့် ၅၀….။ ကားအရှိန်က လျော့ချလိုက်ပြီ….။ စက္ကန့် ၃၀….။ စက္ကန့် ၂၀….။ ဘရိတ်နင်းလိုက်သဖြင့် ကားသည် တန့်ခနဲ ရပ်သွား၏။ ဇက်ကြိုးအား သတ်လိုက်သကဲ့သို့ ….။ သူတို့သည် တခုခုအား တတွက်တွက်နှင့် ရွတ်နေကြ၏။ `သံဗုဒ္ဒေ`ဂါထာကဲ့သို့ ကိုရမ်ကျမ်းလာ…. အန္တရာယ်ကင်း ကျမ်းစာ တပုဒ်ပုဒ် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ပုလိပ်များ….နှစ်ယောက် သို့မဟုတ် သုံးယောက် ထီးဆောင်း၍ ကားဆီသို့ လာကြလိမ့်မည်။ ပြီးလျှင် …. ကားပေါ်တတ်၍ ထိုင်ပြီး ခရီးသွားလက်မှတ်များအား စစ်ဆေးကြမည်။ လက်မှတ် မပါသည့်သူများအား ဆွဲချမည်….။ ဖမ်းမည်။ ငွေတောင်းမည်။ ငွေပေးနိုင်လျှင်မူ….။စက္ကန့်ငယ်တို့၏ ရွှေ့လျာမှုသည် နှေးကွေးလှပေစွ….။ ခဏငယ်တို့ကား ကြာရှည်လှပေစွ….။ ကားအနောက်၌ အရိပ်တစ်ခု ၀င်လာ၏။ သွားပြီ….။ သံလွင်ရောင် ဂျာကင်ထားသည့် ထိုင်းအမျိုးသားတယောက်။ ဘောင်းဘီ၏ အရောင်ကမူ ပုလိပ်တို့ ၀တ်သည့် ယူနီဖောင်းအရောင်မဟုတ် ….။ အဖြူရောင် ပျောက်ကျားဘောင်းဘီ….။ ထီးကိုပိတ်ပြီး ကားပေါ်သို့ တက်သည်။ သူတို့တွေထဲမှ ဆယ်သုံးလေးနှစ်အရွယ် အပျိုမငယ်လေးတဦးအား ထိုင်းလို ပြောနေ၏။ လက်မှတ်တောင်းတာ နေမှာပါ။ အားလုံးပြူးကြောင်ကြောင်နှင့် ကြောင်နေကြသည်။ ထိုင်းလို ထပ်ပြောပြီး လက်ဟန်ခြေဟန်နှင့် နေရာနည်းနည်း ဖယ်ပေးဖို့ ပြသည်။ သိလိုက်ရပြီ။ သူထိုင်ဖို့နေရာ ရွှေ့ခိုင်းခြင်း ….။ သူလည်း ခရီးသည်….။ကားသည် …. ဂီယာထိုးပြီ `ကြာလေးခို့` ဂိတ်အရှေ့မှ ထွက်သည်….။ လွတ်ပြန်ပြီ…. တဂိတ်။ ကြာလေးခို့လွန်လျှင် အရှေ့၌ ကီလို-၄၈ တဂိတ်သာ ကျန်တော့၏။ ထိုဂိတ်က သိပ်ပြီး အစစ်အဆေးမရှိ….။ ဤသို့ သိထားခဲ့ကြ၏။ ကားငယ်လေးအတွင်း စကားသံများပြန်၍ ဝေစီလာသည်။`နင်တို့ တတွေ ကံကောင်းတယ်။ ဘာလက်မှတ်မှ မပါဘဲနဲ့ လာကြတာ….ဒီဂိတ်က မစစ်လို့ ….စစ်လို့ကတော့ နင်တို့အားလုံး ဆွဲချခံထိမှာပဲ …..နင်တို့ကို စိတ်ပူပြီး ငါလည်း နင်တို့အတွက် တချိန်လုံး စိတ်ထဲကနေပြီး စာဖတ်နေရတယ်``နို့ဖိုးသို့ သွားမည့် အသက်ကြီးကြီး အမျိုးသမီးကြီးက ဆိုသည်။ သူမသည်လည်း အစ္စလမ်ဘာသာဝင် တဦးဖြစ်သည်။ သူမပြောသည့် စိတ်ထဲကနေပြီး စာဖတ်နေတယ် ဟူသည်မှာ ကိုရမ်ကျမ်း စာတပုဒ်ပုဒ်အား ရွက်ဖတ်နေခြင်းအား ပြောတာဖြစ်မည်။ခပ်၀၀နှင့် သားသည်အမေက …``ကျမတို့လည်း ဒီမလာခင် ….မုဒုံမှာကတည်းက ဒီခရီး…ဒီခရီးသွားမယ်။ အလ္လာခွင့်ပြုပါဆိုပြီး အလ္လာဆီမှာ ခွင့်တောင်းလာတာ….``သူတို့ အားလုံး၏ မျက်နှာများက ပျော်ရွှင်၍ နေကြသည်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး….။ သားရဲတွင်း အတွင်းမှ လွတ်လာသည့် ယုန်သူငယ်များလို….။ တောင်တန်းများနှင့် နီးလာ၍လား မသိ…..။ ရာသီသည် ပြောင်းလဲ၍လာသည်။ မိုးစဲသွားသော်လည်း ကောင်းကင်သည် လင်းလင်းထင်ထင်မရှိ….။ အေးစိမ့်မှုက ချည်းနှင်း၍ ၀င်လာပြီ။ ယူကလစ်ပင်များက ကားလမ်း၏ ၀ဲယာတွင် အုပ်အုပ်ဆိုင်းဆိုင်း….။ အဝေးမှ တောင်တန်းကြီးများက မြင့်မြင့်မားမား….။ အထပ်လိုက်….အထပ်လိုက်….။ ညို့ညို့မှိုင်းမှိုင်း….။ မှုန်မှုန်ဝါးဝါး….။ မြေသားအရောင်သည် ပတ္တမြားသွေးလည်းမကျ….သံချေးရောင်….။ မိုင်တိုင်များအား တခုပြီး၊ တခု ဖြတ်ကျော်၍သွားသည်။ ကီလို ၄၀….။ ကီလို ၄၂……. ၄၅….. ၄၆…. ၄၇ …။ ၄၈ ကီလို ပုလိပ်ဂိတ်နှင့် နီးလာသော်လည်း ….သူတို့တတွေ၏ စိုးရိမ်မှုက `ကြာလေးခို့`ဂိတ်လောက် မပူလောင်…..။ အရင်ကလည်း ဤဂိတ်က သိပ်၍ စစ်ဆေးသည့် ဂိတ်မဟုတ်….။ အပေါ့အလေး ဆင်းသွား၍ ရသည်။ တောင်ပေါ်သို့ မတက်မှီ နောက်ဆုံးဂိတ်….။ တခါတလေတွင်မူ ပုလိပ်တယောက်တလေ ထွက်လာပြီး ကားအား လှည့်၍သာ ကြည့်သည်။ မေးမြန်း စစ်ဆေးသည်မျိုးက မရှိ….။ကားသည် ၄၈-ကီလို ပုလိပ်ဂိတ် အရှေ့၌​ထိုးရပ်လိုက်သည်။ ၄၈-ကီလို ပုလိပ်ဂိတ်က ယူကလစ်ပင်များ အောက်၌ အရိပ်ခို၍ နေသည်။ အချို့က ကားပေါ်မှဆင်း၍ အပေါ့အပါး သွားကြသည်။ ခလေးများနှင့်သူတို့ မိသားစုသာ ကားပေါ်၌ ကျန်ခဲ့ကြ၏။ ပုလိပ်တယောက်သည် ဂိတ်တဲလေးအတွင်းမှ ထွက်လာပြီး ကားအား လှည့်ပတ်ကြည့်၏။ ပြီးလျှင် ….. ဆယ့်သုံးလေးနှစ်အရွယ် မိန်းမငယ်လေးများအား လက်မှတ် တောင်းကြည့်၏။ မိန်းမငယ်များက ထိုင်းလို ပြောသည်အား နားမလည်….။ ကျီးကြည့် ကြောင်ကြည့်…. ကြည့်နေကြသည်။ ပုလိပ်က သူတို့အား ကားပေါ်မှ ဆင်းခိုင်းသည်။ ခလေးငယ်များကိုလည်း မေး၏။ လက်မှတ်က မရှိ….။ ခလေးများအား ဆင်းခိုင်းပြန်သည်။ ပိန်ပိန်နှင့် သားသည် အမေသည်လည်း နို့စို့အရွယ် ကလေးငယ်အား ရင်တွင်ပွေ့ချီရင်း …. ကားအောက်သို့ ဆင်းပြန်သည်။ တယောက်ကိုမေးလည်း ထိုင်းစကား နားမလည်…..။ လက်မှတ်တောင်းလျှင်လည်း လက်မှတ်ကမရှိ….။ တယောက်တလေလည်းမဟုတ်….။ အားလုံးပေါင်း ၉-ယောက်….။သွေးဆုတ်၍ ဖြူရော်ရော် ဖြစ်နေသော ထိုင်းပုလိပ်၏ မျက်နှာသည် အရောင်တမျိုး ပြောင်းလာသည်။ နောက်ဆုံး ကျန်နေသည့် ခပ်၀၀နှင့် အမျိုးသမီးအား ကားပေါ်မှ ဆင်းခိုင်းသည်။ အမျိုးသမီး၏ ၀ဖိုင့်သော ခန္ဓာနှင့် ကားမူး၍ သူမ၏ ရင်ခွင်တွင် လဲနေသော ခလေးကြောင့် ချက်ချင်း ကားပေါ်မှ မဆင်းနိုင်….။ ထိုင်းပုလိပ်သည် ဒေါသ ထွက်လာ၏။ အမျိုးသမီး၏ေ ကျာကုန်းအား တဘုန်းဘုန်း ရိုက်နှက်ပြီး ဆင်းခိုင်းနေ၏။ကျန်ခရီးသည်များက မျက်နှာ လွှဲထားလိုက်ကြ၏။ မြင်နေရသည့် မြင်ကွင်းက စိတ်မသက်သာစရာ…။ မတတ်နိုင်….။ သူတို့အားလုံးအား ၄၈ ကီလိုဂိတ်ရှိ အချုပ်ခန်းအတွင်း ထည့်လိုက်ကြသည်။ သူတို့၏ ပစ္စည်းများအား ကားပေါ်မှချ၍ ယူကလစ် ပင်ရင်း၌ပင် စုပုံထား၏။ ကျန်ခရီးသည်များ ကားပေါ်သို့ ပြန်၍ တက်ကြသည်။ ယူကလစ်ပင် အရိပ်မှ ကားငယ်သည် တဖြည်းဖြည်း လှိမ့်၍ ထွက်လာသည်။ ၄၈-ကီလို ရဲကင်းစခန်းက ယူကလစ်ပင် အရိပ်အောက်၌ ပုန်းခိုရင်း ကျန်ရစ်လေပြီ….။ ဤ ရဲကင်းစခန်း၏ အချုပ်ခန်းငယ်လေးအတွင်း၌ကား ….. သူတို့ မိသားစုများ…..။ကားသည် တောင်တန်းကြီးများဆီသို့ အရှိန်နှင့် တိုးဝင်သွားနေ၏။ မြင့်မားသော တောင်တန်းကြီးများအား ကွေ့၍ … ၀ိုက်၍… ချိုး၍… တက်ရပေလိမ့်မည်။ရွှေအိမ်စည် Summary only...
ကျော်စွာမိုး | အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈ယခု ပြဿနာက မြန်မာနိုင်ငံကို ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်နေသည့် စစ်အစိုးရနှင့် အတိုက်အခံ အင်အားစုများအကြား ရှေ့မတိုး နောက်မဆုတ်သာ ဖြစ်နေရသည့် လိပ်ခဲတည်းလည်း အခြေအနေမျှသာ မဟုတ်တော့ပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိကအတိုက်အခံ ပါတီကြီးအတွင်း၌လည်း အတွင်း ကြိတ် ပြဿနာများ၊ နိုင်ငံရေး မကျေလည်မှုများနှင့် ကြုံတွေ့နေပြီဖြစ်သည်။ အဓိကအတိုက်အခံ ပါတီကြီးဖြစ်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) မှ လူငယ်အဖွဲ့ဝင် ၁၀၉ ဦးတို့ မကြာသေးမီက နုတ်ထွက်စာ တင်ကြသည်မှာ ပါတီစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှစ၍ ပြန်ကြည့်လျှင် အရေး ပါသည့် အဖြစ်အပျက်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ဤဖြစ်ရပ်ကြောင့် ပါတီတွင်း ဒီမိုကရေစီ ကျင့်သုံးနေပုံကို မေးခွန်းထုတ်ဖွယ် ဖြစ်လာစေပြီး အသက်အရွယ်ကြီးမြင့်နေကြပြီ ဖြစ်သည့် ပါတီ၏ ခေါင်းဆောင်သူများအတွက် ပို၍ သိက္ခာကျစရာ၊ အားလျော့စရာ ဖြစ်လာစေသည်။ လူငယ်အဖွဲ့ဝင်များက ပါတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် သူတို့အနေနှင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့် မရှိကြောင်း မကျေလည် ပြောဆိုသံများထွက်လာပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ အစုအပြုံလိုက် နုတ်ထွက်စာတင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ရွှေက ပါတီခေါင်းဆောင်မှုအတွက် လူငယ်အကြံပေး ၆ ဦးနှင့် လူငယ်လှုပ်ရှားမှုများကို ဦးဆောင်ရန် ခေါင်း ဆောင် ၁၀ ဦး တာဝန်ပေး ခန့်အပ်စာ ထွက်လာပြီးနောက် ဤသို့ နုတ်ထွက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာရသည်။ လူငယ်များကမူ ပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းက သူတို့ တင်ပြအဆိုပြုသူများကိုလည်း လက်မခံ၊ အကြံပြုချက်များကိုလည်း နားမထောင်ခဲ့ကြ ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုကို ဦးဆောင်နေသည့် ပါတီကြီးအတွင်း အဖွဲ့ဝင်များအပေါ် ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ဤသို့ဖြစ်ပျက်ရသည်က ဆန်းပြားအံ့သြဖွယ် ဖြစ်သကဲ့သို့ ရှက်ဖွယ်လည်း ဖြစ်သည်။“ကျနော်တို့ အဖွဲ့အစည်းက ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့အစည်းပါ။ သည်တော့ ကျနော်တို့တတွေ ဒီမိုကရေစီအခြေခံကို လေးစားလိုက် နာဖို့ လိုတယ်။ အကယ်၍ ကျနော်တို့က ဒီမိုကရေစီ စည်းမျဉ်းတွေကို မလေးစားဘူး ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ အတော်ခက်လိမ့်မယ်” ဟု အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီ၏ လူငယ်ဌာနများတွင် လွန်ခဲ့သည့် နှစ် ၂၀ အတွင်း သစ္စာရှိရှိလုပ်ကိုင်ခဲ့သူ ကိုခင်ထွန်းက ပြောသည်။ ယခုတော့ သူလည်း နုတ်ထွက်ခဲ့သူများတွင် တဦးအပါအ၀င် ဖြစ်နေပြီ။ ကိုခင်ထွန်းသည် ၁၉၈၈ ခုနှစ် ပါတီ တည်ထောင်ခဲ့ချိန်မှစ၍ စွဲစွဲမြဲမြဲ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သောကြောင့် ထောင်ကျခဲ့ရသူ ဖြစ်သည်။ ထောင်ထဲတွင် သူ နှစ်အတန်ကြာ နေခဲ့ရပါသည်။ ကိုခင်ထွန်းကဲ့သို့ပင် နုတ်ထွက်ကြသူ ၁၀၉ ဦးထဲတွင် ယခင်နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း အတော်များများလည်း ပါဝင်နေကြသည်။ အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီခေါင်းဆောင်များ အနေနှင့် ပါတီကိစ္စ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် လူငယ်တို့၏ အခန်းကဏ္ဍကို အသိ အမှတ်ပြုသင့်သည်။ မူဝါဒများ ဆုံးဖြတ်ချမှတ်မည်ဆိုလျင်လည်း သူတို့၏ အမြင်များကို လေးလေးစားစား ထည့်သွင်း စဉ်းစား သင့်ပါသည်။ “လူငယ်တွေဆိုတာ အနာဂတ်ပါ။ ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကို ကျနော်တိုက်တွန်းချင်တာက လူငယ်အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ အမြင်တွေကို နားထောင်ပေးဖို့ပါပဲ” ဟု ကိုခင်ထွန်းက ပြောသည်။အမှန်တကယ်တွင် အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီက အလားတူပြဿနာမျိုး ကြုံတွေ့လာခဲ့ရသည်မှာ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် အစောပိုင်း ကာလများ ကတည်းက ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထိန်းသိမ်းချုပ်နှောင်ခံထားရသည့် အချိန်မျိုးတွင် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပါတီသက်တမ်း ၁၉ နှစ်တာကာလ အတွင်း ၁၃ နှစ်ကျော် အချုပ် အနှောင်တွင်း နေထိုင်ခဲ့ရသဖြင့် ပါတီအရေးကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့် မရှိဖြစ်နေရသည်။ လက်ရှိ အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ပါတီကို မပျက်စီးရလေအောင် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် ပေးသူများဟု ခံယူထားကြသော်လည်း ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ရှေ့ဆက်ချီတက်နိုင်ရန် အတွေးအမြင်နှင့် မဟာဗျူဟာ များ ချမှတ် ကြံဆခြင်းကိုမူ ထိုးထွင်းမလုပ်လိုကြပေ။ လက်ရှိ ပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းအနေနှင့် ယနေ့ ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကို ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုနိုင်စွမ်း ရှိ - မရှိနှင့် ပတ်သက်၍ အကြိမ်ကြိမ် မေးခွန်းထုတ်ခံခဲ့ရဖူးသလို စိန်ခေါ်မှုများလည်း အကြိမ်ကြိမ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးသည်။ လူထု အစိတ် အပိုင်းတချို့၊ ဒီမိုကရေစီအရေး ထဲထဲဝင်ဝင် လှုပ်ရှားနေကြသူများ၊ နိုင်ငံရေးသမားများကလည်း အန်အယ်လ်ဒီနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ပျက်နေခဲ့ကြသည်။ သူတို့အမြင်တွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် အလိုအလျှောက်ပဲ့ထိန်းဖြင့် ရေလွှာကြောတွင် ဦးတည်ရာမဲ့ မျော နေသည်ဟု မြင်ကြသည်။ သည်အတိုင်းသွားနေပါက တချိန် ပါတီတခုလုံး၏တန်ဖိုးနှင့် အရေးပါမှုကိုပါ စွန့်လွှတ်လိုက်ရ တော့မည့် အန္တရာယ်ရှိနေသည်ဟု မြင်ကြသည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်နှိုက်က ပါတီဦးဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုခဲ့ဖူးသည်။ ဒေါ်စုက ပါတီ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ရသည့်အချိန်တွင် သူ့ကို စောင့်မနေဘဲ ပါတီ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ပြတ်ပြတ် သားသား ရှေ့ဆက်သွားရန်ပြောဆိုခဲ့ဖူးသည်။ ပါတီအနေဖြင့် တခါတရံတွန်းထိုးလှုပ်ရှားရန်လိုသလို တခါတရံ စည်းရုံးသိမ်း သွင်းရန်လည်း လိုသည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ တခါတရံ သူက ဦးဆောင်မည်ဖြစ်သော်လည်း၊ တခါတရံ သူကိုယ်တိုင်က အခြား သူများ ဦးဆောင်မှုကို လိုက်ရလိမ့်မည်ဟု ဒေါ်စုက ပြောခဲ့သည်။ လက်တွေ့တွင် ဤပြဿနာက မျိုးဆက်ချင်း ကွာဟမှုကြောင့် ပို၍ကြီးသွားပုံ ရသည်။ ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဦးအောင်ရွှေနှင့် ဦးလွင်တို့က အသက် ၈၀ နှောင်းပိုင်း၊ ၉၀ ထဲ ၀င်နေကြပြီ။ တချို့သော လှုပ်ရှားသူများကလည်း စစ်တပ် တပ်မှူးများအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဖူးခဲ့ကြသည့် သူတို့၏ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းဦးဆောင်သည့် အာဏာရှင် စနစ်တွင် ထိပ်တန်းတာဝန်များ ယူခဲ့ဖူးကြသည့် အနေအထားတို့ကြောင့် ယုံကြည်မှုမရနိုင်သည့် အနေအထား ဖြစ်နေကြရသည်။ ခြွင်းချက်တခုကမူ အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီ၏ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးကို လူအများက နှစ်လို ထောက်ခံနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ဦးတင်ဦးသည် ဦးနေ၀င်းအစိုးရ လက်ထက်တွင် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းခဲ့ဖူးသော်လည်း လူအများက လေးစားကြည်ညိုကြသည်။ သို့ရာတွင် အသက် ၈၀ ထဲသို့ ၀င်လာပြီဖြစ်သော ဦးတင်ဦးလည်း အိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရ သည်။ ယခုအခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်နှိုက်သည်ပင် အသက် ၆၃ နှစ် ရှိလာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ နုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့ကြသည့် လူငယ်များမှာ ပါတီအနာဂတ်အတွက် အမှန်တကယ် အရေးပါသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ယခုလို အစုလိုက်အပြုံလိုက် နုတ်ထွက်ခြင်းကို လျစ်လျူရှုမနေသင့်သလို၊ လျှော့တွက်၍ မဖြစ်နိုင်ပါ။ယခုအချိန်သည် အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီ ခေါင်းဆောင်မှုအတွက် သေရေးရှင်ရေး အချိန်ဖြစ်နေပေပြီ။ အတိုက်အခံပါတီ၏ အိမ်ကိုယ်နှိုက်က ပြိုလုတည်းတည်း အခြေအနေတွင် စစ်အစိုးရ၏ အာဏာရှင်လုပ်ရပ်များကိုသာ ထိုင်ဝေဖန်နေ၍ အကျိုးမရှိနိုင်ပါ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အတွင်း ညီညွတ်ရေးရရှိရန် အရေးကြီးသကဲ့သို့ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုကြီး အတွင်း၌လည်း ညီညွတ်ရေးက အရေးကြီးလှသည်။ သို့မှသာ နိုင်ငံ အနာဂတ်လှပနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်သည် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများအဖို့ ရှင်းလင်း၊ ပြတ်သားသည့် မူဝါဒ ရည်မှန်းချက်များအောက်တွင် စုစည်း ညီညွတ်ရတော့မည့် အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင် အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီက မိမိပါတီအတွင်း ကွဲပြားနေမှု၊ မယုံ သင်္ကာ သံသယလွှမ်းမိုးနေမှုများကို အလျင်အမြန်ပြင်ဆင်ပြီး ဦးဆောင်သက်သေပြရတော့မည့် အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ကျော်စွာမိုးရေးသားသည့် A House Divided ကို ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုဖော်ပြပါသည်။
အငိုဒုက္ခ တိုင်းပြည်လိုသလို ပုဒ်မ ချလို့ ရတဲ့အငို ဒုက္ခ တိုင်းပြည်မှာမိစ္ဆာတွေ ဘုရင်လုပ် နေသည်။လိပ်ပြာတွေကို နှင်ထုတ်နေသည်။သွေးညှီနံ့တွေနဲ့ချဉ်စုတ် နေပြီ။လူတွေအားလုံး ရင်ရှုပ် နေသည်။တက္ကသိုလ်များ လယ်ကွင်းထဲသို့ ပြောင်းသွားလေပြီ။ဘွဲ့ ရတစ်ယောက် အလုပ်မရ၍ ခေါင်းစားနေသည်။သူတောင်းစားတို့ ကျ ကောင်းစားနေသည်။အိတ်ကပ်ကြီးတွေ ဖောင်းကားနေသည်။တိုင်းပြည်ကြီးကို တညီတညွတ်ထဲ ရောင်းစားနေပြီ။ယတြာတွေချေပြီး မန်းမှုတ်နေပြီ။သံဃာတွေကိုတောင် ဝရမ်းထုတ် နေပြီ။အလှူရှင်တွေ မရှောင် ဖမ်းချုပ်နေပြီ။လူမဆန်စွာ ကြမ်းကြုတ်နေပြီ။ဖြုတ်ဦးနှောက်တွေနဲ့ ..အရမ်း..လုပ်နေပြီ။သူတို့ ခေါင်းထဲ..သွားမကြည့်နဲ့ ..ဘာမှမရှိဘူး..အဟောင်းသား။လူတွေလည်း..တွေးလာကြတယ်..တစ်ရွာပြောင်းရင်..ကောင်းမလား။ဒီလိုနဲ့ ပဲ..မိသားစုတွေ..မဆုံဆည်းနိုင်လောက်အောင်..ချောင်းခြား။ဘဝနဲ့ ရင်းပြီး..ကြိုးစားတာတောင်.. မရေရာတဲ့ ...လောင်းကစား။ဒါတွေဟာ.. အမေတစ်ကွဲသားတစ်ကွဲ.. ဖြစ်နေရတဲ့.. အကြောင်းများ။ရင်ထဲကို.. သောကငှက်တွေ.. ကျူးကျော်လာတာတောင်.. မမောင်းအား။သူငယ်ချင်းတစ်ချို့  အလုပ်ရှာဖို့ ..စင်ကာပူကို ထွက်နေကြတယ်။အလုပ်မရရင် သိန်းနှစ်ဆယ်လောက်.. ရှုံးပြီဆိုတော့ မျက်ရည်ကျမယ်။ကြိုးစားကြည့်လိုက်မှ ပိုဆိုးသွားတတ်တာ.. ဒီခေတ်ဆိုးရဲ့ သက်သေတစ်စပဲ။ကမ္ဘာက သာမန်လူတွေနဲ့ ငါတို့ ကာရန်တူရုံလေးတောင်.. ဘာလို့ ဒီလောက်အထိ ခက်နေရသလဲ။မြေညီထပ်လေး ရောက်ဖို့ တောင်.. ကိုယ့်စိတ်ဓာတ်ကိုယ်.. လှေကားလိုနင်းပြီး.. တက်နေရဆဲ။ဆန္ဒခံယူပွဲ အတုကြီးနဲ့ လည်း ကမ္ဘာကိုတောင် နားလှည့်ပါးရိုက်။မသူတော် အချင်းချင်းကျတော့ အိမ်နီးချင်းကောင်း ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ဖားလိုက်။သူငယ်ချင်းတို့ ......သူတို့ မျှားလာတဲ့ ငါးစာတွေကို မစားနဲ့ ...ထားလိုက်။အသိဥာဏ် မရှိတဲ့ ခွေးသူခိုးတွေဟာခြောက်ဆယ့်နှစ်တုန်းကထက်လည်း သွေးဆိုး နိုင်တယ်။နောင်တစ်ချိန်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို ဒိုင်းနမိုက်နဲ့မဖောက်ဘူးလို့ ဘယ်သူပြောရဲသလဲ။ကမ္ဘာ့မြေပုံကြီးထဲက သွေးကွက်လေး တစ်ကွက်ရဲ့ ကံကြမ္မာကို ဘယ်သူဟောရဲသလဲ။သူငယ်ချင်း...မင်း..အေးအေးဆေးဆေးနေလို့ လည်း ဒီဂယက်က လွတ်မယ်မထင်နဲ့ ။မိစ္ဆာတွေ မဆင်းမချင်း ဒီဝဋ်က ကျွတ်မယ် မထင်နဲ့ ။ဝန်နဲ့ အားမမျှတဲ့ မင်းစီးလာတဲ့ဒိုင်နာဟာ အချိန်မရွေး လမ်းချော်မှောက်သွားနိုင်တယ်။ကပ်တစ်ခုစိုက်လိုက်တာနဲ့ မင်းဘဝက အချိန်မရွေး လမ်းပေါ်ရောက်သွားနိုင်တယ်။တိုင်းပြည်ကို ခြယ်လှယ်နေတဲ့ ဘုရင်တစ်အုပ်ဟာအစိုးရနာမည်ခံထားတဲ့ မစင်တစ်ထုပ်ပါပြည်သူတွေကလည်း သူတို့ ထင်သလို အချဉ်မဟုတ်ပါ။ဒီလိုနဲ့ မခံချင်စိတ်တွေ ငလျင်ခဏခဏလှုပ်သူတို့ တွေရဲ့  ပလ္လင်ခဏခဏလှုပ်လည်းအခုထိမပြုတ်သေးတော့တစ်ယောက်တည်းတွေးရင်း ရင်ရှုပ်ပေါက်ကွဲမှုတွေကို ကဗျာအဖြစ် အပြင်ထုတ်လိုက်တယ်။ဒုက္ခတွေနဲ့ရှုပ်ပွနေတဲ့ စိတ်ဓာတ်ခြွေ ပြောင်းပြန်ကမ္ဘာထဲလဲကျတိုင်းသာ ပုလဲခနေရင် မျက်ရည်တွေသာ ချောင်းလျှံလာမယ်။အကျိတ်အခဲတွေ စိတ်ထဲမှာ သိပ်သည်းကာ ဗြောင်းဆန်လာတယ်။စကားလုံးတွေ ကြမ်းသွားမိခဲ့ရင် ကဗျာဖတ်သူကို တောင်းပန်ပါတယ်။ကောင်းကင်ကို(အီးလ်မေးပို့ပေးသောဇင်ဇင်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ။)